“Customers are life-blood of the company.” ဆိုတဲ့စကားကို အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားပါ။ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်း ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဝယ်သူမရှိရင်/ Customers တွေ မကြိုက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဈေးကွက်မရှိပါဘူး။ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ Sale များများဖြစ်ပြီး Profit တက်ချင်တယ်ဆိုရင် Customers တွေကို ပို,ပိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က Sale & Marketing ပိုင်းက တာဝန်ရှိသူဆိုရင်၊ Customer Service ပိုင်းနဲ့ Front Line ပိုင်းမှာ တာဝန်ယူထားတဲ့သူဆိုရင် ခုပြောပြပေးမယ့် Customers တွေကို တွေ့ဖူးကြမှာဖြစ်သလို၊ Complaints တွေအတွက် ကိုယ်ပိုင် Solution ဒါမှမဟုတ် Company’s Rules & Regulations တွေနဲ့ ဖြေရှင်းဆက်ဆံဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လို Customers တွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်က ဝယ်သူမှ Loyal အထိ ဖြစ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး High-Roller Customer နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ သူကတော့ ကိုယ့်ဆီကနေ အကောင်းဆုံးတွေကို မျှော်လင့်ထားတဲ့သူပါ။ သူတို့တွေဟာ မတူထူးခြားသော အရည်အသွေး၊ ပုံစံတွေအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ တန်ဖိုးပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းမှာဆိုလည်း အထူးအလေးပေးခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအချိန်မှာ Complaints ဖြစ်ပေါ်တတ်လဲဆိုတော့ သူတို့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းမှာ Error ပါတာမျိုး၊ သူတို့မျှော်လင့်ထားသလောက်/ ကြော်ငြာထားသလို လက်တွေ့ မဟုတ်တာမျိုး၊ Service ပိုင်းမှာ Delay (နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ) ဖြစ်တာမျိုးတွေမှာပါ။ အဲ့လိုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် သူတို့လိုချင်တဲ့ အရည်အသွေးဖန်တီးပေးကာ Quick Respond ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်၊ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း Contact Feedback လုပ်နေဖို့လိုပြီး ဝယ်သူအဖြစ်မှ Loyal Customers အဖြစ်ရောက်ဖို့ဆိုရင် Trust ရအောင် လုပ်ရပါမယ်။ ကိုယ့် Product နဲ့ ဟို Brand က ဘာကွာတာလဲ? ဆိုပြီး Competitor Brands တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် မေးခံရဖူးပါသလား။ မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးတတ်ကြတဲ့အပြင် ကိုယ့် Product နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ Experience , Feelings ၊ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ပြောပြတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ Customers တွေကို Expert တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ အားလုံးကို သိ၊ တတ်၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် သူတို့သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို Details မသိရတဲ့အခါမျိုးနဲ့ အရောင်းဝန်ထမ်းဘက်မှ မရှင်းပြနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Complain တက်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောပြနိုင်တဲ့သူကို တာဝန်ပေးသင့်ပြီးတော့ သူတို့ဆီက စကားတွေကို ကောင်းစွာနားထောင်ကာ တစ်ဖန်ပြန်ပြီးမေးခွန်းတွေ မေးတတ်ဖို့လိုပါပေတယ်။ Expert တွေဆီက အကြံကောင်းတွေဟာ အလားတူကုန်ပစ္စည်းတွေထက် သာလွန်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေ ( အမျိုးအစားအသစ်၊ ဈေးကွက်တိုးချဲ့မှုပိုင်းစတဲ့ အခွင့်အလမ်းများ )၊ အသစ်သစ်သော ဝယ်သူများ၊ ရောင်းအားများ မြှင့်တက်စေနိုင်တာကြောင့် လက်မလွှတ်စေပါနဲ့။ Experts တွေကိုကျ နားထောင်ပေးဖို့အဓိကပေမယ့် ဘယ်ဟာယူရမလဲ? ၊ ဝယ်ရင်ကောင်းမလား၊ မဝယ်ပဲနေလိုက်ရမလား? ဆိုပြီး တွေဝေနေတတ်တဲ့ ဝယ်သူတွေလည်းရှိပြန်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အရေးကြီးဆုံးမှာ ပြတ်သားတဲ့ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ မေးခွန်းတွေမေးပြီး ကူညီပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဝယ်သူက ဖုန်းလာဝယ်တယ်ဆိုပါစို့။ ဘယ်ဟာရွေးချယ်ဝယ်ယူရမလဲဆိုပြီး ဝေခွဲမရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဝယ်သူက Camera ကောင်းတာကို အသားပေးလိုချင်တာလား၊ Storage များတာကို ပိုလိုချင်တာလားဆိုတာမျိုးတွေကို သိရအောင် ဝယ်သူအလေးထားလိုချင်တဲ့ အမျိုးအစား၊ အရည်အသွေးကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ပေါ်လွင်သိရှိလာစေဖို့ မေးခွန်းတွေမေးပြီး ရှင်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ တွေဝေတတ်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ရွေးချယ်စရာများလေ ခက်ခဲလေဖြစ်လို့ သူတို့နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးအရာအချို့ထဲက သူတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါပေတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ အလွယ်တကူ Complain တက်လွယ်တဲ့ ဝယ်သူတွေအကြောင်းပြောပြပါဦးမယ်။ သူတို့တွေက ကုန်ပစ္စည်းစတင်လေ့လာ ရွေးချယ်ခြင်း အဆင့်ကနေစပြီး ဝယ်ယူပြီးအဆင့်တွေအထိ Process တစ်ခုလုံးမှာ စောင့်ရတာမျိုး၊ အဆင်မပြေမှုသေးသေးလေးတွေကအစ လက်မခံချင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်ခြေတွေကို မကြိုက်တတ်တဲ့အပြင် ခေါင်းမာတတ်သူတွေပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ သာဓကပြောပြရရင် Complainer တွေဟာ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီး သွားစားတယ်ဆိုပါစို့။ မှာယူတဲ့ ဟင်းပွဲပြင်ဆင်ပုံ၊ အရသာ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဈေးနှုန်း တွေမှာ သူတို့မှတ်ယူထားသလို ဖြစ်မလာတာနဲ့ ချက်ချင်း ပြောကြတာမျိုး၊ ဝေဖန် / တိုင်တန်းတာမျိုးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ Perfect ကို လိုလားသူတွေဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဘက်က လုပ်နိုင်မယ့်၊ ပေးအပ်နိုင်မယ့် Quality & Service တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသိပေးသင့်ပြီးတော့ Complaints တွေမှာ သက်သေတွေနဲ့ ဖော်ပြ၊ ရှင်းပြနိုင်မှရပါမယ်။ သာမန်အဆင်မပြေတာ၊ အလိုမကျတာတွေများလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲများကနေ Quality နှင့် Brand ပေါ် Trust ကျနိုင်လို့ ထိုလူမျိုးတွေကို သတိထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့လိုပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာမှ အထူးသတိထားဖို့က “Pessimist (အဆိုးမြင်သမားများ)” တွေပါ။ သူတို့ထဲမှာမှ အချို့က ကိုယ့် Products အပေါ်မယုံသကာၤဖြစ်တယ်၊ ဝယ်ယူပြီး အဆင်မပြေတာ၊ မကောင်းတာမျိုးတွေပြောကြသူတွေဖြစ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ မဝယ်ဖူး၊ အသုံးမပြုဖူးပဲ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာမျိုး၊ Brand Image ကျအောင် Negative သဘောဆောင်ပြီး ပုံမှားရိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေအတွက် Brand Image မကျအောင်၊ Trust မလျော့အောင်အတွက် Quick Respond ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြောဆိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေအတွက် သက်သေနဲ့အထောက်အထားဖော်ပြတာမျိုး၊ Tester များနဲ့ Trial စမ်းသပ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ အရည်အသွေးများကို ကိုယ်တိုင်သိရှိလာအောင် Experience များဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေကို အချိန်မဆွဲပဲ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ Blame လုပ်တဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး နောက်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေအထိပါ လုပ်ဆာင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ Brand Loyalty Customers တွေကို တန်ဖိုးထားရာရောက်ပြီး Potential Customers တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိထားနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အဆိုးမြင်တိုက်ခိုက်သူတွေရှိသလို တစ်ဖက်မှာလည်း Complaints တွေ၊ Conflicts တွေကို မလိုလားပဲ တိတ်တဆိတ် ပုံမှန်ဝယ်ယူသုံးစွဲနေတဲ့ Customers မျိုးတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ သူတို့တွေဟာ လိုအပ်မှုအတွက်ဝယ်ယူကြတာဖြစ်သလို၊ ကိုယ့်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသိပြီးသားဖြစ်လို့ ကိုယ့် Brand ကို ယုံကြည်ပြီးသားလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က complain တက်ခဲပြီး အကောင်းမြင်ပေးတယ်၊ ဖြေရှင်းမှုတိုင်းကို နားလည်လက်ခံပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကို Loyal Customers အဖြစ် Keep ထားဖို့လိုတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ့် Product ပေါ်အမြင်၊ သူတို့ရဲ့ Needs & Wants တွေကိုလည်း ဂရုတစိုက်မေးမြန်းလေ့လာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Discount Customers နဲ့ Wandering Customers တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးလိုပါတယ်။ “Discount Customers” တွေက များသောအားဖြင့် ကိုယ့် Products ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြတဲ့သူတွေ၊ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ သူမျိုးတွေမဟုတ်လို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်မှ ဝယ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ အများအားဖြင့် Percentage Discount, Cash or Coupon Discount တွေကို စောင့်မျှော်တတ်ကြပြီးတော့ တန်တယ်ဆိုတာထက်၊ အလွန်တန်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှဝယ်ယူဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Complaints တွေကတော့ Discount Items တွေ Quality မလျော့ဖို့၊ Service လိုအပ်ချက်ရှိတာမျိုးတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Brand ကို Special Discount တွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ Request လုပ်နေတတ်ကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကိုယ့် Brand ရဲ့ Update အကြောင်းအရာတွေ၊ အစီအစဉ်တွေကို မျက်ခြေမပျက်စောင့်နေတတ်ကြတာကြောင့် သူတို့တွေအတွက် Campaign တွေ ဖန်တီးပေးဖို့၊ ကိုယ့် Brand ရဲ့ Added Value ဟာ ဘယ်နေရာမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိမြင်လာပြီး ‘Price = Value’ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံလာအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဒါမှလည်း Loyal Customers တွေအဖြစ်ရောက်ရှိလာအောင် ဆွဲခေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ “Wandering Customers” ကတော့ အသစ်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်သိရှိလိုတဲ့ ဝယ်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သီးသန့် Brand အစွဲမရှိကြပဲ ကိုယ့် Brand ကို ဝယ်ယူလေ့ရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ အမြဲ အကြိုက်ပြောင်းနေတတ်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ Experience ကို ခံစားလိုတာကြောင့် Complain မတက်ကြပဲ ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြပါတယ်။ သူတို့တွေကို Regular Customers ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင် Brand တစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ကိုယ့် Products & Service ရဲ့ Differences တွေကို အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုးထားလာအောင် Direct Marketing ပိုင်း၊ Visual Branding တွေနဲ့ Loyal အထိမြှင့်တက်လာအောင် ကြိုးစားလို့ရပါတယ်။ Complaints တွေဟာ ဝယ်သူတွေရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကနေ ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို သတိလက်လွှတ်ထားရင် Potential Customers တွေကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်ချင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဝယ်သူတွေကို လေ့လာပါ၊ ဂရုစိုက်ပါ၊ ဝယ်ယူသူတွေ ဂုဏ်ယူကျေနပ်လောက်တဲ့ Brand အဖြစ် ‘Image Building’ လုပ်ပါ။ တော်တော်များများက Customers’ Complaints တွေကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအဖြစ်၊ Threats အဖြစ် သတ်မှတ်ကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က အခွင့်အလမ်းအဖြစ် မှတ်ယူကာ Value-added လုပ်ပါ။ ဒါဟာ Loyal Customers တွေ များလာတဲ့အခါ လုပ်ငန်းအတွက် Marketing Expenses တွေနဲ့ Ad Charges တွေကိုလျော့ချနိုင်ပြီးတော့ ဒီ Customers တွေက Passive Way နဲ့ Profit တွေ တိုးပွားလာစေပါလိမ့်မယ်။ Hnin Lae Lae Oo
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ကုန်ပစ္စည်း(ဒါမှမဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပြီးတော့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း အချိန်တိုင်းမှာ ရောင်းသူလည်းဖြစ်သွားတတ်သလို၊ ဝယ်သူသုံးစွဲသူလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ဝယ်ယူ သုံးစွဲသူတွေအကြောင်းကို နားလည်သလိုနဲ့ ရောင်းချနေတတ်ကြတာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အရောင်းပိုင်းကလူတွေ၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေသူတွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးဟာ Customers တွေရဲ့ Buying Behaviour, Buying Process အကြောင်းတွေကို ပညာရပ်တစ်ခုပုံစံ အသေးစိတ် သင်ကြားလေ့လာလိုက်စားလာကြပြီး Customers’ Trends များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Customers တွေရဲ့ အသက်ကာလအပိုင်းအခြား၊ နေရာဒေသ၊ ဝင်ငွေ စတဲ့အချက်များနှင့် Customers တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် / အကြောင်းအရာတို့ကို Database လုပ်ပြီး Online, Offline ကြော်ငြာခြင်း၊ Promotion Plan များဆွဲခြင်း၊ Product Development ဖန်တီးခြင်းတို့ ပြုလုပ်လာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Customers တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ ပုံသေမရှိပဲ အနီးအနားက အကြောင်းအရာတွေလွှမ်းမိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် အမြဲ ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်လို့ မရောင်းခင် ဝယ်မယ့်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ Trends တွေကို အမြဲမျက်ခြေမပျက်ဖို့လိုပါတယ်။ Sales & Marketing Management နဲ့ Business Management ပညာရပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ Customers တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေကို ဖောက်သည် Customers လို့ခေါ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူသူတွေကိုတော့ Clients လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Products or Service သုံးစွဲသူ ( End Users ) တွေကိုတော့ Consumers စားသုံးသူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ( ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမှတ်သားရန်မှာ ဝယ်ယူသူတိုင်းဟာ Consumers တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဥပမာ ကြောင်လေးတွေအတွက် ကြောင်စာဝယ်တယ်၊ ဝယ်သူတွေဟာ Customers တွေဖြစ်ပြီးတော့ စားသုံးတဲ့ Consumers တွေကတော့ ကြောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဝယ်ယူခြင်း Purchase ဖြစ်ဖို့က End Users တွေပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်ဆိုတာပါပဲ။) ကျွန်မတို့တွေ ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုဝယ်ယူသုံးစွဲကြတဲ့နေရာမှာ သတိမထားမိတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Psychological လွှမ်းမိုးမှုများနဲ့ ဝယ်ယူပုံ အဆင့်ဆင့် Buying Process ဆိုတာရှိပါတယ်။ Buying Process ကို သဘာဝကျကျစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ကြော်ငြာတစ်ခုကိုတွေ့မယ် --> လိုချင်လိုက်တာ --> ဘယ်သူတွေဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ Reviews, comments တွေရှာကြည့်ဦးမယ် / အပြင်မှာခင်းကျင်းပြထားတာဆို Packing ကိုဖတ်ကြည့်မယ်၊ အစမ်းပြထားတာရှိရင် Trial လုပ်ကြည့်မယ်။ --> ခုဝယ်မယ်/ နောက်မှဝယ်မယ် ဆိုတဲ့အဆင့်တွေပါ,ပါမယ်။ သင်ကြားချက်မှာ 1) Need Recognition 2) Information Search 3) Evaluation of Alternatives 4) Purchase Decision 5) Post Purchase Evaluation ဆိုပြီး အဆင့် ၅ဆင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ Customers’ Buying Journey ကို သိပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီကနေ ကိုယ့် Products ကို ဝယ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ?? 1) Need Recognition (လိုအပ်ချက်ကို သတိပြုမိခြင်း) သုံးစွဲသူ / ဝယ်ယူသူတွေအား ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို လိုအပ်တယ်၊ ဝယ်သင့်တယ်လို့သိရှိလာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပါ။ ဝယ်သူတွေဟာ ကြော်ငြာကိုတွေ့ပြီး လိုချင်လို့ဝယ်ယူကြတာရှိသလို၊ သူတို့မှာရှိတဲ့အရာက အဆင်မပြေလို့ တခြားဟာ ပြောင်းသုံးဖို့ လိုအပ်လာတာမျိုးတွေရှိတတ်တာကြောင့် - ကိုယ့်လို Product Type ကနေ ဖြစ်တတ်တဲ့ Error မျိုး၊ ဝယ်သူတွေကြုံရတတ်တဲ့အခက်အခဲမျိုး၊ Competitors တွေရဲ့ Weakness စတဲ့ Problems တွေကို အမြဲနားစွင့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Brand က ပေးနိုင်တဲ့ Taste or Functions တွေဟာ Solution ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိအောင် လုပ်ရပါမယ်။ - Trends ပိုင်းကိုလည်း မျက်ခြေမပျက်စေပဲ Brand နဲ့အကိုက်ညီဆုံးအချိန်တွေမှာ Online ကနေ Ad လွှတ်ဖို့၊ - Offline တွေမှာဆိုရင်လည်း Payday Date ဝန်းကျင်မျိုး၊ အခါကြီးရက်ကြီးများ၊ Seasonal Period စတဲ့ ကာလမျိုးတွေမှာ Promotion Event တွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ Marketing Budget ကို သေချာသုံးပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ နေရာယူနိုင်အောင် နေရာတိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာ မြင်လွယ်တဲ့ ကြော်ငြာပုံစံမျိုးစုံ ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင်ပြောရရင် - Billboard ad, Bus Tv ad နဲ့ taxi ကိုယ်ထည်တွေမှာ Sticker ကပ်တာမျိုး.. ဒါက အရင်ပုံမှန်ကြော်ငြာထည့်ကြတဲ့ပုံစံတွေပါ။ ယခုဆိုရင်တော့ ဖုန်းအသုံးပြုမှုများခြင်းနဲ့ Social Media တွေမှာ ကိုယ့် Brand Customers တွေရှိကြတာကြောင့် Audience များတဲ့ News Page, Cele Page, Memes, Movies or Series တွေမှာ ကြော်ငြာထည့်ခြင်း၊ Influencers များကိုအသုံးပြုတဲ့ ad ၊ Influencers’ reviews စတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ Awareness & Interest ရအောင် ကြော်ငြာတွေဖန်တီးနေကြပါပြီ။ 2) Information Search လိုအပ်လာပြီလို့သိတဲ့အခါမှာ ဘယ် Brand ကောင်းမလဲဆိုတာကို Online ကနေ ရှာတာမျိုး၊ ကိုယ့်အနီးအနားက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက စုံစမ်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့် Brand ဟာ Searching List မှာပါဝင်နေဖို့၊ သူများကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ညွှန်းနိုင်မယ့် Brand ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ - Online မှာဆိုရင် Customers တွေအများဆုံးရှိမယ့် Social Platform တွေမှာ ပစ္စည်းကိုကြော်ငြာတင်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ စက်ပစ္စည်းဆို လက်တွေ့ Function သရုပ်ဖော်တင်ပြတဲ့ Video Clip မျိုး၊ အစားအသောက်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုပါ တွဲဖက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ Knowledge Content တွေနဲ့ Display လုပ်ထားပါ။ Reviews တွေ၊ Good Comments & Feedback တွေအတွက် Appreciate လုပ်တာမျိုး၊ Bad Comments နဲ့ အခြား Conflicts တွေအတွက် အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်တွေကိုလည်း ပေါ်လွင်အောင်လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး Public Relation ပုံစံ / User Friendly အဖြစ်မြင်အောင် Image ကို တည်ဆောက်ထားရပါမယ်။ - Offline မှာဆိုရင် ကိုယ့် Product ကို တစ်ခါဝယ်ယူဖူးထားတဲ့သူတွေကနေ သူ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအား ကိုယ့် Brand အကြောင်း Word-of-Mouth ဖြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အကောင်းဆုံး Service ဖြစ်အောင် Personal Selling ပိုင်းအတွက် Sale Staff များကို ကျွမ်းကျင်အောင် Train ထားခြင်း၊ မဝယ်ခင် လေ့လာနိုင်အောင်သော်လည်းကောင်း/စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်အောင်သော်လည်းကောင်း Trial များ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ 3) Evaluation of Alternatives Customers များက ရွေးချယ်စရာများထဲမှ အသင့်တော်ဆုံး/အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်ဟာကို စဉ်းစားအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေ ဒီလိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါတယ်။ Convenience ဖြစ်၊မဖြစ် (သွားဝယ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ မှာယူရလွယ်ကူခြင်း၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်း) Price & Perspective Value ကိုယ်အပါအဝင် ဝယ်ယူသူအားလုံးဟာ ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် Sensitive ဖြစ်ကြတာပါပဲ။ မဝယ်ခင်မှာ ပစ္စည်းက ပြောထားတဲ့ Price နဲ့တန်၊ မတန် လေ့လာအကဲဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို Perspective Value (ကိုယ်ကသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပဲ အခြားသူများမှ မှတ်ယူထားသော တန်ဖိုး) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဝယ်သူတွေဟာ ဈေးများလွန်းတယ်လို့ယူဆရင် မဝယ်ဖြစ်တတ်သလို၊ ဈေးနည်းလွန်းရင်လည်း Brand အပေါ်မှာသံသယဝင်တတ်လို့ တည်ငြိမ်ပြီး ထိုက်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ User Interface / User Experience ဝယ်ယူသူတွေဟာ အသုံးပြုရလွယ်ကူတာမျိုး၊ ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာ၊ ဖန်တီးမှုပုံစံအသစ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း လိုချင်ကြပါတယ်။ သာဓကအနေနဲ့ဆိုရင် Visa Card နဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပကဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်နိုင်တာမျိုး၊ ဖုန်းကို လက်ဗွေရာနဲ့ ဖွင့်တာမျိုး၊ အခြား Auto System မျိုးတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခြား Brand တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့် Brand က သာနေဖို့ Users Expectation တွေကို လေ့လာတွက်ချက်တတ်ရပါမယ်။ 4) Purchase Decision အပေါ်ကအဆင့်ဆင့်ကို စဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေဆုံးလို့ သတ်မှတ်တဲ့ Brand ကိုဝယ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ 5) Post Purchase Evaluation ဒီအဆင့်မှာတော့ မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ထင်ထား၊ မျှော်မှန်းထားသလို တကယ်ပဲကောင်းရဲ့လား၊ ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ရောတန်ရဲ့လား စသည်ဖြင့် တွက်ချက်ပြီး နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ မဝယ်တော့ဘူးတို့၊ နောက်ဆို ဒါပဲ သုံးမယ်တို့ အမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဝယ်သူက စိတ်ကျေနပ်ရင် Next Time Purchase နဲ့ အခြားသူတွေကို Good Reviews တွေပေးနိုင်သလို၊ ဝယ်သူက Satisfy မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြောင့် အရောင်းကျပြီး Image ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် Customer Feedback ကို ပြန်လည်တောင်းခံဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုလို ပျံ့နှံ့လွယ်တဲ့ကာလတွေမှာ Responds တွေဟာ ထိလွယ်၊ရှလွယ်လို့ ဝန်ထမ်းတွေကို သေချာလေ့ကျင့်ပေးထားဖို့ အမှန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Customer Orientation ခေတ်မှာ ဝယ်ယူသူတွေကို အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း Customers တွေရဲ့ စိတ်သဘောထား၊ အတွေးတွေကိုနားလည်အောင်၊ ကိုယ့် Brand ဆီကနေ သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ Quality နဲ့ Product အသစ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်အောင် ကျွန်မတို့တွေကြိုးစားရပါမယ်။ အဓိက,ကတော့ ကိုယ့် Brand ကို အသုံးပြုပြီး ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့အထိ Quality and Image ကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပေးဖို့ပါ။ Revlon Cosmetics ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Charles Revson က “ In the factory, we make cosmetics; in the store, we sell hope. ” ဆိုပြီး Customers တွေရဲ့ Expectation နဲ့ Satisfaction ကို အလေးထားကြောင်းကို ဒီစာသားနဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Hnin Lae Lae Oo
အခုနောက်ပိုင်း Social Media (လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ) ကနေ ကြော်ငြာ Post တွေတင်တဲ့အခါ အရင်လို Reachedမရောက်တော့တာ၊ Engagementမတက်တော့တာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကိုအ‌ဖြေရှာတဲ့အခါ ၂ မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမတမျိုးက Target Audience ရွေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ရှိလို့ပါ။ ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Boost လုပ်တယ်၊ audience လည်းသေချာရွေးတယ်၊ ဒါ‌ပေမယ့် Engage မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်‌ရေးထားတဲ့ Advertising post (ကြော်ငြာ Post) ကို လူတွေစိတ်မဝင်စားကြလို့ပါ။ အဲ့တော့ Writing Skill and Style လိုနေပြီလို့ မှတ်ယူထားလိုက်ပါ။ ကိုယ်အပါအဝင် လူတော်တော်များဟာ အားလပ်ချိန်အများစုကို Facebook သုံးစွဲရင်းနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်တတ်ကြတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့်က Newsfeed Scroll လုပ်မယ်၊ စိတ်မဝင်စားတာကိုကျော် စိတ်ဝင်စားတာတွေပဲရွေးဖတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် post တစ်ခုပေါ်5seconds လောက်ပဲအာရုံရောက်တာဆိုတော့ ကိုယ်က အဲ့ ရတဲ့ 5s မှာ Audience ရဲ့ အာရုံကို အမိဖမ်းထားပြီး စာကိုအဆုံးထိဖတ်ဖြစ်အောင် ယူငင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ Audience နေရာက စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။ Post တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင် ပုံကိုအရင် အာရုံရောက်ပြီးမှ စာက ဘာကိုသူပြောတာလဲဆိုတဲ့ Keywords ကို လိုက်ရှာဖတ်တတ်ကြတာပါ။ ကိုယ်သိချင်တယ်ဆိုမှ See more နှိပ်ပြီးဆက်ဖတ်တယ်၊ စာရှည်လို့ဖတ်ရမှာပျင်းရင် ပုံတွေကို Click လုပ်ပြီးကြည့်ကြပါတယ်။ ဒါက လူတိုင်းလုပ်ကြတဲ့ Process ပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ လူတော်တော်များများဟာ ကြော်ငြာ post ဆို Promotion မပါရင် စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ ဒါ‌ကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာ မိမိတို့ရဲ့ ကြော်ငြာ Post တွေကို Audience စိတ်ဝင်စားအောင်၊ Engagement တက်အောင်၊ Action ဖြစ်အောင် ဖန်တီး‌ရေးသားတဲ့အခါ သတိပြုဆင်ခြင်ရမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 1. Headline Ad post တွေရေးတဲ့အခါ အရင်လို အရောင်းဖြစ်အောင် ပစ္စည်းတွေမိတ်ဆက်ပြမယ်၊ လျော့ဈေးတွေပြောပြမယ်၊ စာသားတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေတဲ့ Post ကို မြင်လိုက်ကတည်းက ငြီးငွေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ Headline ဆိုတာကတော့ ခေါင်းစည်းစာသားကိုခေါ်တာပါ။ Post တစ်ခုလုံးကို ရည်ညွှန်းမယ့် ခေါင်းစဉ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ တော်တော်များများ Brands တွေက Headlines ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး Audience ရဲ့ attention ကိုဖမ်းတတ်လာကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် Post တွေကို Text (စာသားများ) တွေနဲ့မစပဲ Headline နဲ့ စ,ပါ။ - Promotion Plan ရှိရင် ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ပေးပါ။ (Eg. Buy3get 1 အစီအစဉ်လေးလာပါပြီ။ မွေးနေ့ရှင်တွေအတွက် 15% Discount ရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးကြပြီလား?) - Promotion Plan မရှိရင်လည်း မတူညီတဲ့ရှုထောင့်နဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါ။ ဒီပစ္စည်းကိုပဲ ကြော်ငြာနေတာဆိုရင်တောင် Headlines တွေ ပြောင်းပေးဖို့၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် စာသားပုံစံတွေ Change ပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ (Eg. ရုံးက Tea Time ရောက်မှသတိမရပါနဲ့.. မနက်ခင်းတွေလဲ ကိုယ့်ကို သတိရပေးပါ A Tea Mix။ အချစ်တွေကခါးရင်တောင် A Tea Mix ကတော့ မင်းအတွက် ချိုမြိန်စေမှာပါ။) - Headline ကို တစ်ကြောင်းထဲ One line - One shot ဖြစ်အောင်သုံးပါ။ attention ယူရမှာဖြစ်လို့ စာသားက ရိုးရှင်းလို့မရပါဘူး၊ ရှည်ရင်လဲ ပုံမှန်စာကိုယ်ပုံစံလိုဖြစ်သွားမှာမို့ ကျစ်လျစ်ထိမိဖို့လိုပါမယ်။ (Eg. Coca-Cola ရဲ့ "Things go better with Coke" , "OpenaCoke, open happiness" ) Headline က Post ရဲ့ ပထမဦးဆုံး attention ရရန်ဖြစ်လို့ အထူးဂရုစိုက် ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ 2. See more နှိပ်အောင် Post တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ပထမဆုံး စာ ၃ ‌ကြောင်းကိုပဲ အရင်ဖော်ပြပေးထားပြီး ကျန်တဲ့စာသားတွေကို Audience စိတ်ဝင်စားမှဆက်ဖတ်ဖို့ see more... ဆိုပြီးချိတ်ထားတာကို အားလုံးပဲသိကြပြီးသားပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် Audience တွေအရင်ဆုံး မြင်ရမယ့် ပထမ၃ကြောင်းမှာ ကိုယ်သိစေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ပါအောင်ထည့်ပြီး Interest ရအောင် ရေးသားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့အတွက် ad post မရေးခင် Keywords ကိုစဉ်းစားပါ။ Keywords ကို ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ - ဘယ်ပစ္စည်းကိုအဓိကရောင်းမှာလဲ? - Audience အား ဘယ်အကြောင်းအရာကိုသိစေချင်တာလဲ? - Customers တွေ ဘာလို့ ဝယ်သင့်တာလဲ? - ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့မတူအောင် ဘယ်လိုကြော်ငြာမလဲ? အဲ့ကနေမှ Attention ရနိုင်မယ့် စာကြောင်းတွေကို ပထမဦးဆုံးတင်ပြဖို့ စုစည်းပါ။ သာဓကအနေနဲ့ Huawei ရဲ့ မကြာခင်က Ad တစ်ခုနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ "Did you know experts are saying #Huawei #P40ProPlus has the best smartphone hardware? A larger, longer camera module, includingaperiscope zoom...See More" ဆိုပြီးတော့ပါ။ ကြော်ငြာစာသားအစမှာ Reviewer တစ်ယောက်ကနေပြီး Huawei ရဲ့ ဖုန်း Model အသစ်ကို Best smartphone လို့ ညွှန်းဆိုထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပြီးပြီလားလို့မေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Zoom Function နဲ့ ပတ်သက်ပြီး lager, longer camera module ဆိုတာက‌နေ ကျန်တာဘာ‌တွေပါမလဲဆိုပြီး See more... ကို နှိပ်ချင်‌အောင် အစပျိုးပြီး See more မနှိပ်ခင် ပုံကိုအရင်ဖြတ်ခနဲကြည့်တော့လည်း "Zoom Shot Challenge: Huawei P40pro plus Vs. Samsung S20 Ultra Vs. i Phone 11Pro And More" ဆိုတာကြောင့် အချိန်ပေးပြီးဝင်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြပါတော့တယ်။ 3. Text + Image See more နှိပ်ပြီးလို့ စာပိုဒ်တြွေမင်ပြီဆို လူတိုင်းနီးပါးဟာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ Main Point ရှိမယ့်အပိုဒ်ကို ရှာကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ စာပိုဒ်တွေများရင် Interest မရှိတော့ပဲ ပြန်ထွက်တတ်ကြတာမို့ - စာပိုဒ်ငယ်‌လေးတွေ ပုံစံနဲ့သွားပါ၊ - ကိုယ်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို အရင်မြင်ပြီး အာရုံရောက်အောင် Bold text style လေးတွေသုံးပါ၊( အရမ်းများရင်လဲ အဓိပ္ပါယ် ပေါ့သွားတတ်လို့ သတိပြုပါ ) - Space ခြားပြီး attention ကိုဆွဲခေါ်ပါ၊ - မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်‌တွေလည်း သုံးကြည့်ပါ၊ ( " " ၊ ' ' ) - အလေးအနက်ပြတဲ့နေရာတွေမှာ Symbols သုံးကြည့်ပါ၊ ( * , ! , ✓ , ~ , # , <-- ) Emoji တွေသုံးနေတာထက်စာရင် Symbols တွေနဲ့ တွဲသုံးတာက ပိုအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြော်ငြာမယ့် ပစ္စည်းအရေအတွက်ကများသွားတာ / ပစ္စည်းတခုချင်းစီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထည့်ပေးချင်တဲ့အခါမျိုးတို့ဆိုရင် စာပိုဒ်အရှည်ကြီးက ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး၊ အဲ့ဒီအခါမှာ Text + Image ပုံစံသွားပါ။ သာမန်အကြောင်းအရာကို မူရင်း post မှာရေးပြီး ပစ္စည်းတမျိုးရဲ့ ပုံအောက်မှာ သီးသန့် ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကို Caption Text အနေနဲ့သွားတာ အထိရောက်ဆုံးပါ။ Audienceအတွက် စာပိုဒ်ရှည်ကြီးကိုမြင်ပြီး မငြီးငွေ့တော့သလို သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ product ရဲ့ image ကို နှိပ်ပြီးဖတ်လိုက်ရုံဆိုတော့ အဆင်‌ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ် ( ပုံတွေအောက်မှာ ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေဖော်ပြထားကြောင်းကိုတော့ မူလ Post မှာပြောပြထားဖို့တော့ လိုပါမယ်နော် ) 4. Details ပစ္စည်းရောင်းဖို့ Ad post တင်ကြရမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ စဉ်းစားရမှာလေးတွေရှိပါတယ်။ Details ထည့်လိုက်ရင် ကောင်းတာအနေနဲ့က 1 post နဲ့ ကိုယ့် Products အကြောင်းကို စုံလင်အောင်သိရှိနိုင်မယ်၊ Interest ဖြစ်ပြီး ဝယ်ဖြစ်ရင် Contact ပါလိမ့်မယ်။ တဖက်မှာကျ Details ပြောပြလိုက်ရင် Audience အရေအတွက် ဘယ်လောက်က Interest ဖြစ်တယ်၊ မဝယ်ဖြစ်သေးပေမယ့် ဝယ်မယ့်အလားအလာရှိတဲ့သူ (Potential Customers) ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ Conversation or Communication ရတဲ့နှုန်းလဲ နည်းပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Audience က အကုန်သိသွားပြီး ဝယ်ဖြစ်မယ့်သူ‌လောက်ပဲ ဆက်သွယ်လာတော့မှာပါ။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက Promotion အစီအစဉ်တွေဆိုရင်တော့ နားလည်မှုမလွဲအောင် သေချာဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်က Sale တက်အောင်ဆိုပြီး 50% Discount Post တင်လိုက်တယ်၊ Customers တွေက All items ထင်ပြီးလာဝယ်တော့မှ Selected Items ပါဆိုရင် Negative Image ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ‌တွေက အထူးသတိပြုရမှာပါ။ 5. Call to Action Digital Marketing သမား‌တွေသိကြမှာပါ။ Ad post နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Analytical Report ပြန်တင်ရတဲ့အခါ Interest ဘယ်လောက်၊ Potential ဘယ်လောက်၊ Sale ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လို Responds ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပါ တင်ပြရတာ‌ကြောင့် Audience ‌တွေကို Details မဖော်ပြပဲ Call to Action ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ Call to Action ဆိုတာ Audience ‌တွေကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်အောင်နှိုးဆွပေးပြီး Interest & Prospect person တွေကို သိအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Comment မန့်အောင်၊ Message Box မှ စကားလာပြောအောင်၊ ဖုန်းဆက်အောင် နှိုးဆွပေးတာမျိုးပါ။ မြင်သာမယ့် ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်။ "အကျီ Design တြွေပထားမယ်၊ 50% Discount ပေးပါမယ်၊ Stock ရှိသလောက်သာ ရောင်းချပေးမှာဖြစ်လို့ မိမိလိုချင်တဲ့ Color နဲ့ Size ကို Message Box မှာ စုံစမ်းပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်" ဒါဆိုရင် comment နဲ့ message box မှာ Traffic ဖြစ်သွားပါမယ်၊ Reply မစောင့်နိုင်တဲ့သူ‌တွေက ဖုန်းနံပါတ်ကို Click လုပ်ပြီးမေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ကြော်ငြာ Post တစ်ခုဟာ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး Reached ပိုရောက်သွားပါတယ်။ 6. Share Share ကလည်း Call to Action တစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ့်ကြော်ငြာ Post ကို လူတစ်ယောက်က မြင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဆက်မဖတ်ပဲကျော်ဖို့ 50% နဲ့ ဝယ်ဖြစ်ဖို့ 50% ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့အဲ့တစ်ယောက်က Post Shareလိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ friends အရေအတွက် 80% ဆီ ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကြော်ငြာကို သူတို့မြင်မယ်၊ သူ့ friends တွေကနေလဲ Sale ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Share ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?? - တခြားသူတွေလည်းသိအောင် မျှဝေပေးပါဦးနော်။ - ဘော်ဒါတွေကို လက်တို့လိုက်ရအောင်။ - ဘယ်သူ့ကို Share ပြီး ပူဆာကြမလဲ။ စတဲ့ ဒီလိုစာသားမျိုးတွေနဲ့ Share ဖြစ်အောင် နှိုးဆော်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Ad ကို Share ကြပေမယ့် Sale သိပ်မဖြစ်ရင်တောင် Awareness များများရောက်တဲ့အတွက် ဒါလဲ အမြတ်တစ်ခုပါပဲ။ 7. Emoji Ad post မှာ Text တွေပဲဆိုရင် Audience က ရိုးအီပြီး Interest ကျမှာစိုးတာကြောင့် တော်တော်များများက Emoji တွေ အတော်အတန်ညှပ်သုံးကြပါတယ်။ ဒီနေရာ တစ်ခုရှိတာက အနှံ့အပြား မသုံးမိဖို့ပါ။ တင်တဲ့ post မှာ Emoji ပွထနေတာ၊ Brand နဲ့ အဆက်အစပ်မရှိသုံးတာတွေက Brand Image ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ (အပေါစားဆန်ရင်း အလေးအနက်မရိြှဖစ်သွားတတ်တဲ့သဘော ရှိပါတယ်) ဒါကြောင့် match ဖြစ်မယ့် Emoji လောက်ပဲသုံးသင့်ပါတယ်။ Premium Brand တွေမှာ Emoji မသုံးကြပါ။ Headline မှာ Emoji မသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါ။ Emoji ကို စာပိုဒ်တိုင်းမဟုတ်ပဲ အပိုဒ်ကျော်သုံးတာ၊ ရှေ့နဲ့အနောက် မျှသုံးတာမျိုး၊ အချက်အလက်နဲ့ ရှင်းပြထားတာတွေပါရင် ကျန်တဲ့စာပိုဒ်တွေမှာမသုံးတော့ပဲ Facts တွေကို Sign Emoji တွေနဲ့ သုံးတာမျိုးတွေက ပိုလေးနက်ပြီး Main Point ကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ 8. Link ချိတ်ပါ Text တွေချည်းပဲ ဖောင်းပွနေမယ့်အစား အသေးစိတ်သိလိုတဲ့သူတွေအတွက် post ခွဲတင်ထားပြီး Ad နဲ့ကျမှ Link ပြန်ချိတ်ပေးတာမျိုးပါ။ ဒါလဲ Call to Action ပုံစံဖြစ်ပြီး Insights မှာ Link Click, photo Click, other click ဆိုပြီး လူအရေအတွက်ဘယ်‌လောက်Action လုပ်ထားလဲဆိုတာကို ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရင်း Potential Customers ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ Ad မလုပ်ထားတဲ့ posts တွေ၊ Video Clip , Activities, Feedback Posts မျိုးတွေ နဲ့ ကိုယ်တင်မယ့် ကြော်ငြာ post ကို Support ဖြစ်စေမယ့် posts အဟောင်းတွေကို link ချိတ်ပေးပါ။ ဒါက ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Product Knowledge ရရှိသွားစေမှာဖြစ်သလို published posts တွေမှာ Reached ပိုတက်မယ်၊ Text များပြီး ကြော်ငြာလည်းမရှည်တော့ပါဘူး။ 9. Hashtag # ဒါက Keywords တွေနဲ့တွဲသုံးပေးရတာပါ။ ဥပမာ Customers တွေက Iced Tea သောက်ဖို့ ဘယ်ဆိုင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး Search မှာ စကားလုံးအမျိုးမျိုးနဲ့ ရိုက်ရှာကြပါတယ်... Tea, Iced Tea, Bubble Tea, Tea Shop, Milk Shake စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲ့အခါ ကိုယ့်ဆိုင်ကိုလဲ Options မှာ ပေါ်အောင် Ad Post ရေးတဲ့အခါ Keywords တွေကို hashtag တွဲသုံးကြဖို့ ထပ်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က Hashtag မသုံးမိရင်လဲ စိတ်မပူပါနဲ့။ Text ထဲမှာ Keywords တွေပါရင်ရပါပြီ။ ခုနကလို Customers တွေက ဘယ်ဆိုင်ကောင်းမလဲ၊ ဘာတွေရှိမလဲဆိုပြီး Search မှာရိုက်ရှာတဲ့အခါ Facebook ကနေပြီး သူတို့ရိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့စာသားတွေပါတဲ့ ကြော်ငြာ posts တွေကို ပြပေးပါတယ်။ ဒီအချက် ၉ ချက်ကတော့ ကြော်ငြာပို့စ် စာသားတွေ တင်တဲ့အခါ Audience မငြီးငွေ့ဖို့၊ Reached & Engaged ပိုဖြစ်ဖို့ သတိထားစဉ်းစားရမှာလေးတွေကို ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ နောက်တခေါက်မှာတော့ Visual Content နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျှဝေ‌ပေးသွားပါဦးမယ်။ ဒါကြောင့် ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် အများကြီးမရှင်းပြပါနဲ့၊ Call Action ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး Sale ဖန်တီးပါ။
အရင်ဆုံး Latent Market အကြောင်းကိုမပြောခင် “Potential Market” (အလားအလာရှိတဲ့ စျေးကွက်) နဲ့ Untapped Market (အသုံးမပြုရသေးသော စျေးကွက်) အကြောင်းတို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Potential Market ဆိုတာကတော့ အခြား Competitor Brands (ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အလားတူ Products) တွေလည်းရှိနေနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်က အရည်အသွေးပိုကောင်းမယ်၊ စျေးနှုန်းသင့်တင့်မယ်၊ ၀န်ဆောင်မှုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ၀ယ်ယူသုံးစွဲကြမယ့်သူတွေ / ဝယ်ယူဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူတွေ စုစည်းတည်ရှိနေတဲ့ စျေးကွက်မျိုးကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Customers/Consumers မဟုတ်ကြသေးပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ချေအများဆုံး ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Untapped Market ဆိုတာကတော့ ဘယ် Brands ၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီမှ မတို့မထိရသေးတဲ့၊ မထိုးဖောက်ရသေးတဲ့ စျေးကွက်မျိုးကို ဆိုပါတယ်။ Product Selling လုပ်ရင်း၊ Market Research လုပ်ရင်းနဲ့ ဒီစျေးကွက်ကိုသိလာကြပေမယ့် များသောအားဖြင့် သီးသန့် Product or Service ပြင်ဆင် ထုတ်လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်တာရယ်၊ အခြား Risk တွေလည်းရှိတော့ ဒီစျေးကွက်ကို သိနေသော်လည်း ဒီအတိုင်းသာ ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိမ်မြုပ်နေသော စျေးကွက်ဆိုတာဟာ ကိုယ့်အတွက် Profits တွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့်အလားအလာရှိပြီး အဲဒီစျေးကွက်ထဲ ဘယ်သူမှမရောက်ရှိသေးတာဖြစ်လို့ Potential and Untapped Market လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီစျေးကွက်ထဲကို လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေ (Existing Products) တွေနဲ့ ၀င်ရောက်နိုင်သလို၊ အခြားသော New Product တွေနဲ့ ဖန်တီး နေရာယူတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ Latent Market ရဲ့ ၀ိသေသတွေမှာ ၁။ ၀ယ်ယူသုံးစွဲဖို့ ငွေအလုံအလောက်မရှိသေးသောသူများ ၂။ လိုအပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေမရှိသေးတာ ၃။ ကိုယ်ပေးတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုကို ရှိမှန်း / အသုံးဝင်မှန်း မသိတာမျိုးတွေ ပါ၀င်ပါတယ်။ Product or Service တစ်ခုပေါက်ပြီ၊ Consumers တွေကြိုက်ကြပြီဆိုရင် အလားတူ product or service တွေ ပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ Promotion တွေအပြိုင်အဆိုင်လုပ််ရင်း Profit တွေကျပြီး စျေးကွက်ပျက်လာပါတော့တယ်။ Pioneer (စွန့်ဦးဖန်တီးထုတ်လုပ်သူ) တွေဟာလည်း Market Leader (စျေးကွက်ကို ဦးဆောင်သူ) ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါတော့မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Blue Ocean, Red Ocean ဆိုပြီး လုပ်ငန်းရှင်တွေက တင်စားပြောကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ (အပြိုင်အဆိုင်နည်းမယ်၊ ၀ယ်လိုအားကောင်းပြီး Profit များများဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်) Blue Ocean တစ်ခုကို ရွေးချယ် ဖန်တီးကြဖို့လိုလာတယ်။ New Product or Service တစ်ခုဖန်တီးမလား ? New Market ကို သွားမလား? ဆိုတာမျိုး... လုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာ Risk ယူရပေမယ့် Market Research လုပ်၊ ဇကာနဲ့ စစ်ထုတ်သလို Segment ခွဲပြီး Target ထားရတဲ့ Latent Market မှာ Positioning (နေရာယူခြင်း) လုပ်ဖို့ပဲ ရွေးချယ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါ စျေးကွက်ထဲ ၀ယ်သူတွေလိုချင်တဲ့ Product or Service မရှိတာမျိုးဆိုရင် (New Product Development) ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ထုတ်လုပ်ပြီး အဲ့ဒီစျေးကွက်ကို Offer ပေးကြတယ်။ မြင်သာတဲ့ ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ယခုလိုကာလမှာ တော်တော်များများ အိမ်မှာနေရင်း မုန့်မျိုးစုံကို ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်လုပ်စားကြပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်တွေဟာ အနောက်တိုင်းအစားအစာတွေထက် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ရတာပိုခက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ “တင့်တင့် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်မျိုးစုံလုပ်ငန်း” ကနေပြီး မုန့်ဖက်ထုပ်၊ မုန့်လက်ကောက်၊ မုန့်လုံးရေပေါ်၊ မုန့်ကြာစိ စတဲ့ မြန်မာမုန့်တွေကို Frozen Food အဖြစ် စားသုံးသူတွေ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ (ဒါဟာ Latent Market ကို Right Time ရောက်ရှိသွားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။) မေးစရာရှိတာက Latent Market ဟာ Consumers တွေက ကိုယ့် Product ကို Purchased လုပ်ဖို့ ငွေအလုံအလောက် မရှိသေးလို့ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်ပါ…? Promotion နဲ့ Price ထိန်းညှိတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့် Market က ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ လူများများဝယ် - စျေးအသင့်အတင့်ရောင်း ဆိုတဲ့နည်းစနစ် (High Sale Volume – Low Price) (ဒါမှမဟုတ်) Quality လျော့ပြီး Low Cost နဲ့ သီးခြား Product အမျိုးအစား ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းတော်တော်များများက လက်ရှိပစ္စည်းကိုပဲ Loan or Installment စီစဉ်ပေးကြတာများပါတယ်။ မကြာခင်က Travel & Tour ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ Half-paid နဲ့ ခရီးသွားပြီး ကျန်တာကို ပြန်လာမှ ပေးလို့ရတဲ့ Plan တစ်ခုကို ကြော်ငြာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါဟာ Customers တွေက မဝယ်သေးဘူး / စျေးကြီးတယ်တို့ တွေးနေရင်တောင် ဒီလို အစီအစဉ်လေးတွေဟာ Sale ဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးရာရောက်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ Consumers တွေက ကိုယ့် Products ကို မသိသေးဘူး၊ ကိုယ့် Service ကို လိုအပ်မှန်း မသိကြတာဆိုရင်တော့ Marketing ကို Online, Offline နှစ်မျိုးလုံး သုံးဖို့လိုလာပါပြီ။ Online ပိုင်းမှာဆိုရင် Social Platform တွေအများကြီးထဲကမှ ကိုယ့် Target Audience ရှိတဲ့ အထိရောက်ဆုံး Media ကိုရွေးချယ်ကာ Competitors တွေနဲ့ ကိုယ့် Brand ရဲ့ အရည်အသွေး၊ လုပ်ဆောင်ချက် မတူကွဲပြားချက်တွေ ပေါ်လွင်စေပြီး Psychological အရ “Need Recognition” (လိုအပ်တယ်လို့သိရှိခြင်း) ဖြစ်လာစေမယ့် Branding Contents မျိုးတွေကို တင်ပြတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ - Milo ကို Hot & Cold လောက်ပဲ လုပ်သောက်ဖို့ သိကြပေမယ့် Milo Delgona ဖျော်ရည်၊ Milo ရေခဲချောင်း၊ ရေခဲမုန့်၊ ကွတ်ကီး၊ ကိတ်မုန့် စတဲ့ အချိုပွဲတွေလုပ်စားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ Product Knowledge နဲ့ ပြင်ဆင်ပြုလုပ်နည်းတွေကို Milo ဟာ Social Media ကတစ်ဆင့် Customers တွေကို တင်ပြပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Offline ဆိုရင်လည်း ကိုယ့် Products or Service ကို Awareness ဖြစ်အောင် / Target Customers/Consumers နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီး Presentation လုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးရပါမယ်။ Customers တိုင်းဟာ သူတို့ကို ဂရုစိုက်တာလိုချင်ကြပြီး သူတို့အခက်အခဲ၊ အဆင်မပြေတာတွေကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပေးတာလိုချင်ကြတယ်။ Feedback တွေကို ဂရုတစိုက်နားစွင့်ပြီး ကိုယ့် Improvements တွေ၊ Update အကြောင်းအရာတွေကို Customers တွေအမြဲသိရှိနေအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် စျေးကွက်နဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အခြေအနေကို အမြဲလေ့လာပါ။
စျေးကွက်က သားရဲကွင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင် Latent Market ကို ရှာဖွေဖန်တီးပါ။ တိမ်မြုပ်နေသောစျေးကွက်မှာ Pioneer ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် Product Customization နဲ့ Innovation ဟာအဓိကပါပဲ…။ Hnin Lae Lae Oo
“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၄)”
Internet Journal Vol.18 ,No.3 , January 16,2017 Written By Aung Pye Phyo. AutoCAD တွင် Drawing တစ်ခုကို ရေးဆွဲရာတွင် ရေးဆွဲသည့် Space ကို Model Space ဟုခေါ်ဆိုပြီး ၎င်းရေးဆွဲထားသော Drawing များကို Plot(Print) ပြုလုပ်ရာတွင် Layout များကိုအသုံပြုပြီး Plot ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိ Model Space မှ Layout သို့ပြောင်းလဲပေးရမည် ဖြစ်ပြီး Tool bar မှ Layout 1,2 စသည်တို့ကို ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံ ကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Layout Model & Layout Tab Layout 1 ကိုဖွင့်လိုက်လျှင် ပထမဦးစွာ Paper Space ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရွက်ပုံသဏ္ဍာန် ရှိနေ ပါသည်။ ၎င်း Paper Space ကိုလေ့လာကြည့်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ကွဲပြားစွာတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ About Layout Paper ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသော View Port ကိုဦးစွာ ဖျက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ရှိ View Port သည် Default paper size ပေါ်တွင် တည်ရှိနေသဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် Paper သာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီး View port သည် မပြောင်းလဲဘဲ မူရင်းအတိုင်းသာကျန်ခဲ့မည် ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ Layout 1 ကို paper define ပြုလုပ်ရန်အတွက် Menu browser(Files) > Page setup manager (သို့) Layout tab ကို Right click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာသော Menu မှ Page setup manager ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာပါက Selection box တွင် Layout 1 ကိုရွေးထားပြီး ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော Modify ကို နှိပ်ပါ။ ထိုအခါတွင် page setup dialog box ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Page Setup Manager Dialog Box Page Setup ထို page setup box တွင်- 1. Printers & Plotters ၎င်းနေရာတွင် မိမိစက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် (သို့) မိမိ print ထုတ်ယူမည့် printer အမျိုးအစားကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ၎င်း printer မှထုတ်ပေးနိုင်သော paper size အမျိုးအစားများကို ရွေးနှုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 2. Paper Size မိမိ print ထုတ်လိုသည့် စာရွက်အမျိုးအစားကို ရွေးပေးရမည်။ 3. Plot Area What to plot နေရာတွင် Layout ကိုရွေးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိလက်ရှိ ရောက်ရှိနေသော View သည် Layout view ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ 4. Plot style & table မိမိထုတ်မည့် Style အမျိုးအစား အဖြူအမည်း ထုတ်ယူလိုလျှင် = Monochrome Color ဖြင့် ထုတ်ယူလိုလျှင် = Screening(100%,75%,50%,25%) ၎င်း % များသည် မိမိထုတ်ယူမည့် Color intensity ကို အတိုးအလျော့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 5. Quality ပုံမှန်အတိုင်းထုတ်ယူလိုလျှင် Normal တွင်သာ ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။သို့မဟုတ်ပဲ အကြမ်းထုတ်ယူလိုပါက draft နှင့် သရုပ်ပြ ပုံကောင်းများထုတ်ယူလိုပါက quality အမျိုးမျိုး ပေးထားနိုင်ပါသည်။ ထို setting များကို အစဉ်လိုက် သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုပါက OK ကို နှိပ်ပြီး ထွက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းနောက် လိုအပ်သော Viewport များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက် Viewport toolbar ကိုခေါ်တင်ထားပါ။ ၎င်း toolbar မှ Single Viewport ကိုရွေးပြီး paper ပေါ်တွင် စိတ်ကြိုက် Viewport တစ်ခုကို ရေးဆွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ Viewports Toolbar ထိုသို့ရေးဆွဲဖန်တီးပြီးပါက paper ပေါ်တွင် မိမိ မှ Model space တွင်ရေးဆွဲထားခဲ့သော drawing ကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိရောက်ရှိနေသော space သည် paper space ဖြစ်သဖြင့် model မှပုံကို လိုအပ်သလို zoom in/out ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ Model space သို့ဝင်ရောက်လိုက်မှသာလျှင် စိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် Viewport ၏အတွင်းပိုင်းတွင် Double click နှိပ်၍ Model space ကို Activate ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှ paper space သို့ပြန်လည်ထွက်ချင်ပါကလည်း Viewport ၏ အပြင်ဘက်ကို Double click နှိပ်၍လည်း ပြန်လည် ထွက်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ command အနေဖြင့် ပြောင်းလဲလိုပါက ps / ms command များဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ Viewport များကို စိတ်ကြိုက်မသတ်မှတ်ဘဲ ရှိပြီးသား Design များဖြင့် သတ်မှတ်လိုပါက viewport toolbar ရှိ view port dialog ကိုဝင်ရောက်ပြီး ဖန်တီးထားပြီးသား Viewport design များကို ရယူအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ Viewports မိမိဖန်တီးလိုက်သော View ကို Print ထုတ်ယူရာတွင် Scale ကိုက်ထုတ်ယူလိုပါက ၎င်း viewport ကို Select ပြုလုပ်ပြီး viewport toolbar တွင်ရှိသော Scale သတ်မှတ်သည့်နေရာတွင် အလိုရှိသော Scale ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Scale သတ်မှတ်ရာတွင် PS:MS အချိုးအတိုင်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပြီးစီးပါက မိမိ Drawing ကို Plot ပြုလုပ်ရန်သာလိုပါတော့သည်။ ထို့အတွက် Menu browser(Files) အတွင်းရှိ Plot ကိုနှိပ်၍လည်းကောင်း၊ မိမိလက်ရှိရောက်ရှိနေသည့် Layout tab ပေါ်တွင် Right click နှိပ်ကာ Plot ကိုရွေးချယ်၍ လည်းကောင်း Plot/Print ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ Print Dialog Box အောင်ပြည့်ဖြိုး(PHYO Training Institute)
“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၁)”
Internet Journal Vol.17,No.50,December26,2016,Written By Aung Pye Phyo. AutoCAD Software သည် Construction လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်တိုင်းတွင် မသုံးမဖြစ်အသုံးပြုနေရသည့် Useful Software တစ်ခုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်များကို မှန်ကန် မြန်ဆန်စွာ ပြည့်မီအောင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသော Software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မည့်သူများအပြင် AutoCAD ကိုလေ့လာလိုက်စားလိုသူများအတွက် သိထားသင့်သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ CAD ဆိုတာဘာလဲ? CAD သည် Computer Aided Design/Drafting ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ အကူအညီဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ရေးဆွဲရာတွင်လည်း တိတိကျကျ ရေးဆွဲဖန်တီးနိုင်စေခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ များသောအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် အခြားသော စက်မှုကဏ္ဍများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျှက်ရှိပါသည်။ Drawing တစ်ခုကို စတင်တော့မည်ဆိုလျှင် AutoCAD Software ကိုစတင်လေ့လာပြီး Drawing များကိုရေးဆွဲတော့မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါကဏ္ဍများကို သိရှိနားလည်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 1. Starting & Preparation Drawing 2. Main Operation 3. Advanced Features 4. Outputs တို့ဖြစ်သည်။ 1. Starting & Preparation Drawing AutoCAD တွင် Drawing တစ်ခုကို စတင်ရေးဆွဲတော့မည်ဆိုလျှင် ဦးစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာ မည်သည့် Unit ဖြင့် အလုပ်လုပ်မည်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် AutoCAD Software ကိုဖွင့်၍ Drawing တစ်ခုကို ဖန်တီးလျှင်ဖန်တီးချင်းပင် Template ရွေးချယ်သည့် Dialog box ကျလာပါသည်။ ၎င်းတွင် Dialog box (၂) မျိုးကို တွေ့မြင်ရလေ့ရှိပါသည်။ Selectatemplate နှင့် Createanew drawing တို့ပင်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Select Template Dialog Box Create New Drawing Dialog Box Latest Version များတွင် Drawing တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးမည်ဆိုလျှင် Select template ဖြင့်သာ စတင်လေ့ရှိကြပြီး Create new drawing ကိုမူ မြင်တွေ့ကြတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ နှစ်ခုကို Startup command ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ Acad နှင့် Imperial feed and inches တို့သည် Feet and Inches စနစ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၊ Metric နှင့် acadiso တို့သည် millimeter စနစ်များကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ သို့အတွက် မိမိရေးဆွဲမည့် Unit ကို စတင် ရွေးချယ်ပေးထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Drawing Units & Limits Drawing တစ်ခုကို ဖန်တီးရာတွင် Unit သည်လည်း မရှိမဖြစ်အရေးပါလှပါသည်။ မိမိရေးဆွဲမည့် Drawing အတွက် အသေးစိတ် Unit သတ်မှတ်ချက်များကို Format menu အတွင်းမှ Units ကိုရွေးချယ်၍ ဖြစ်စေ၊ Command line တွင် “UN” ဟုရိုက်နှိပ်၍ဖြစ်စေ Unit dialog box ကို ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။ Setting Up Units ၎င်း Units ၏ Length type များအတွင်းတွင် Decimal , Architectural , Engineering , Fractional , Scientific တို့ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိအသုံးပြုလိုသည့် Unit ကို စတင်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ Decimal သည် Decimal units များနှင့် Linear units များကို ရေးဆွဲရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Architectural unit သည် Feet & Inches စနစ်ဖြစ်ပြီး Fractional စနစ်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ Engineering Unit သည်လည်း Feet & Inches စနစ်ပင်ဖြစ်ပြီး ရိုက်သွင်းအသုံးပြုလိုက်သည့် ကိန်းဂဏန်းတိုင်းကို Decimal စနစ်ဖြင့် သာအသုံးပြုပါသည်။ Fractional Unit သည်လည်း Architectural စနစ်နှင့် ဆင်တူပြီး ၎င်းတွင် Feet ကိုအသုံးပြု၍မရပါ။ Scientific Unit သည် Decimal စနစ်နှင့် ဆင်တူပြီး အလွန်အသေးစိတ်သော ကိန်းဂဏန်းများကို Scientific notation များဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းနောက်တွင် မိမိရေးဆွဲမည့် Drawing တစ်ခု၏ ဧရိယာကိုလည်း သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရန်အတွက် Format menu အတွင်းရှိ Drawing Limits ကိုဖြစ်စေ Command line တွင် “LIMITS” ဟုရိုက်နှိပ်၍ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ Limits များသည် အမြဲတမ်း အပေါင်း ကိန်းဘက်တွင် တည်ရှိနေပြီး Lower Left Corner to Upper Right Corner သို့သာအလုပ်လုပ်ပေးသည်ကို သိရှိနားလည်ထား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ ပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ Drawing Limits Diagram SavingaCurrent Drawing Drawing တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းမည်ဆိုပါက မည်သည့် File Format ဖြင့် သိမ်းဆည်းမည်။ မည်သည့် Version ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်စေရန် သိမ်းဆည်းမည်ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ AutoCAD Software သည် Drawing တစ်ခုကို အခြားသော File format များစွာဖြင့် သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သလို AutoCAD Version များအလိုက်လည်း ခွဲခြားသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါသေးသည်။ သိမ်းဆည်းလိုသည့် File အမျိုးအစားများပေါ်တွင် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရမည့် Output ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ AutoCAD Drawing (.dwg) , Drawing Standard File (.dws) , Drawing Template File (.dwt) , Drawing Exchanged File (.dxf) တို့အဖြစ်သိမ်းဆည်းလိုလျှင် Save (သို့) Save As ဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်း Version Format များကို ဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအနိမ့်ဆုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုသည့် Version ကိုရွေးချယ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားဖြင့် အလိုရှိသည့်အချိန်တွင် အလိုရှိသည့် Software Version ဖြင့် ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Version Format များကို အောက်ပါပုံတွင်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။ Drawing Formats ExportingaDrawing AutoCAD ဖြင့်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့် Drawing File တစ်ခုကို File အမျိုးကွဲများစွာအဖြစ် ပြန်လည် ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အောက်ပါ File အမျိုးအစားများကို Export ကဏ္ဍတွင် ပြောင်းလဲထုတ်ယူ နိုင်ပါသေးသည်။ Exporting Formats ထိုသို့ဆိုလျှင် Drawing အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အပြင်အဆင်များကို ပြုလုပ်ပြီးစီးပြီဆိုပါက Drawing တစ်ခုကိုရေးဆွဲရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အချက်များကို သိရှိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Aung Pye Phyo (PHYO Training Institute)
“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၂)”
Internet Journal Vol.18,No.1 , January 2,2017,Written By Aung Pye Phyo. Commands Alias AutoCAD ရေးဆွဲခြင်း၏ အသက်သည် Command များကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဟုဆိုလျှင် မမှားနိုင်ပါ။ AutoCAD User များသည် မိမိအလိုရှိသည့် ပုံများကိုရေးဆွဲရာတွင် Tools bar များကို အသုံးပြုခြင်းထက် Command များကို ရိုက်နှိပ်အသုံးပြုခြင်းက ပိုမိုများပြားပြီး Professional ပိုဆန်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။ AutoCAD Commands များကို Main Command များ နှင့် Sub Command များဟူ၍ခွဲခြားမြင်တွေ့ နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို Capital Letter များဖြင့် ရည်ညွှန်းပြဆိုပါသည်။ AutoCAD Commands များကို အုပ်စုခွဲခြားလေ့လာကြည့်လျှင် Draw commands များနှင့် Modify commands များအဖြစ် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Commands များကို အသုံးပြုရာတွင် Menu မှတစ်ဆင့်လည်း တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သလို၊ Command Shortcuts များကိုရိုက်နှိပ်၍လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ AutoCAD Commands များကို အသုံးပြုရာတွင် Absolute co-ordinate နှင့် Relative co-ordinate များကို တွဲဖက်၍အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Co-ordinate ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်သည် AutoCAD ၏ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသည်ဖြစ်ရာ ၎င်းတို့ကိုလည်း သေချာစွာ သိရှိနားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ Comands များသည် 2D Drawing တစ်ခုဖန်တီးရေးဆွဲရာတွင် မသိမဖြစ် သိရှိထားရမည့် Commands များဖြစ်ပါသည်။ Useful Draw Commands Draw Menu >>Line -- L >>Circle -- C >>Ray -- Ray (Latest Version) >>Construction Line -- XL >>Multiline -- ML >>Polyline -- PL >Polygon -- POL >>Rectangle -- REC (Using Relative Co-ordinate) >>Arc -- A >>Spline -- SPL >>Ellipse -- EL >>Block -- B >>Table -- TAB >>Point -- PO >>Hatch -- H >>Gradient -- GRA >>Region -- REG >>Text -- T , DT ,ARCT >>Image Attach -- IAT >>Image Adjustment -- IAD Useful Modified Commands Modify Menu >>Trim -- TR >>Extend -- EXT >>Break -- BR >>Join -- J >>Fillet -- F >>Chamfer -- CHA >>Hatch Edit -- HE >>Write Block -- W >>Group -- G >>Copy -- CO >>Move -- M >>Offset -- O >>Mirror -- MI >>Array -- AR , CLASSICARRAY(Latest Version) >>Rotate -- RO >>Scale -- SC >>Stretch -- S >>Distant -- DI >>Lengthen -- LEN >>Match Properties -- MA >>Attribute -- ATT >>Attribute Extraction-- ATTEXT Useful Formatting Commands Format Menu >>Layer -- LA >>Text Style -- ST >>Dimension Style -- D >>Point Style -- DDPTYPE >>Multileader Style -- MLS >>Multiline Style -- MLSTYLE Useful View Commands >>Zoom -- Z >>Zoom All -- Z (Double Enter) >>Regeneration -- RE >>Redraw -- R >>New Viewport -- MV >>Change Space -- CH အောက်ဖော်ပြပါများသည် အသုံးတည့်သည့် (သို့) သိကိုသိထားရမည့် Toggle Mode များဖြစ်ပါသည်။ Toggle General Features Ctrl+d >>Toggle coordinate display Ctrl+g >>Toggle Grid Ctrl+e >>Cycle isometric planes Ctrl+f >>Toggle running object snaps Ctrl+h >>Toggle Pick Style Ctrl+Shift+h >>Toggle Hide pallets Ctrl+i >>Toggle Coords Ctrl+Shift+i >>Toggle Infer Constraints Manage Screen Ctrl+0 (zero) >>Clean Screen Ctrl+1 >>Property Palette Ctrl+2 >>Design Center Palette Ctrl+3 >>Tool Palette Ctrl+4 >>Sheet Set Palette Ctrl+6 >>DBConnect Manager Ctrl+7 >>Markup Set Manager Palette Ctrl+8 >>Quick Calc Ctrl+9 >>Command Line Manage Drawings Ctrl+n >>New Drawing Ctrl+s >>Save drawing Ctrl+o >>Open drawing Ctrl+p >>Plot dialog box Ctrl+Tab >>Switch to next Ctrl+Shift+Tab >>Switch to previous drawing Ctrl+Page Up >>Switch to previous tab in current drawing Ctrl+Page Down >>Switch to next tab in current drawing Ctrl+q >>Exit Ctrl+a >>Select all objects Manage Workflow Ctrl+c >>Copy object Ctrl+x >>Cut object Ctrl+v >>Paste object Ctrl+Shift+c >>Copy to clipboard with base point Ctrl+Shift+v >>Paste data as block Ctrl+z >>Undo last action Ctrl+y >>Redo last action Ctrl+[ >>Cancel current command (or ctrl+\_) ESC >>Cancel current command Toggle Drawing Modes F1 >>Display Help F3 >>Toggle object snap mode F4 >>Toggle 3DOsnap F5 >>Toggle Isoplane F6 >>Toggle Dynamic UCS F7 >>Toggle grid mode F8 >>Toggle ortho mode F9 >>Toggle snap mode F10 >>Toggle polar mode F11 >>Toggle object snap tracking F12 >>Toggle dynamic input mode အထက်ဖော်ပြပါများသည် AutoCAD User များအတွက် သိရှိနားလည်ထားရမည့် အချက်များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြု၍ 2D Drawing များစွာကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Aung Pye Phyo (PHYO Training Institute)
“လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ AutoCAD အတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များ (၃)”
Internet Journal Vol.18 ,No.2 ,January9,2017, Written By Aung Pye Phyo. AutoCAD ၏ အသုံးဝင်သော Commands Alias များအကြောင်းကို ယခင်တစ်ပတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို Commands များကို အသုံးပြု၍ Drawing များစွာကို လျှင်မြန် ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Auto CAD ကိုစတင်လေ့လာမည့်သူများသည် Mechanical Drawing များကို ဦးစွာ လေ့ကျင့် ရေးဆွဲသင့် ပါသည်။ Mechanical Drawing များကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် Commands အသုံးပြု ပုံများ ကို ကျေညက်နိုင်သကဲ့သို့ ရေးဆွဲခြင်းအယူအဆများကိုပါ လေ့လာသိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယခုဆက်လက်လေ့လာကြည့်မည်မှာမိမိရေးဆွဲမည့် Drawing တစ်ခုအတွက် ကိုယ်ပိုင် Template တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Template ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားလိုသည့် အချက်အလက် Setting များကို စုစည်းထားပြီး အလွယ်တကူ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသော File အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ AutoCAD ၏ Drawing Template File တစ်ခုတွင် Units များ၊ Drawing Limits များ၊ Layers ၊ Properties ၊ Styles များ ၊ Blocks ၊ References ၊ Construction Lines များ၊ Paper များ၊ Print Setting များ စသည့် ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပြီး အလိုရှိသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Template တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ခြင်း ဦးစွာ File အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်၍ မိမိစိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုမည့် Setting များကို ပေးထားပါ။ ပြီးလျှင် Save As (Ctrl+Shift+S )ကိုအသုံးပြု၍ မိမိတည်ဆောက်ထားသည့် Drawing Setting File တစ်ခုကို Template အဖြစ်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ Save As dialog box ပေါ်လာပါက မိမိအလိုရှိသည့် အမည်ကို File Name နေရာတွင်ပေး၍ File of type တွင် AutoCAD Drawing Template(*.dwt) ကိုရွေးပြီး သိမ်းဆည်းပါ။ ထိုအခါတွင် မိမိသတ်မှတ်လိုက်သော အမည်ဖြင့် Drawing Template တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Save as Template Dialog box Template file တစ်ခုအဖြစ် သိမ်းဆည်းလိုက်သောအခါတွင် ထပ်မံ၍ Template Description dialog box ပေါ်လာပါမည်။ ၎င်းသည် မိမိအနေဖြင့် အဆိုပါ Template တစ်ခုကို မည်သည့်အတွက်ပြုလုပ် ထားသည်ကို မှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားနိုင်ရန်အတွက်မေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို ရေးသား ထားရှိနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် OK ကိုနှိပ်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်းကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။ Template Description Dialob box ထိုနည်းဖြင့် မိမိစိတ်တိုင်းကျ Template တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းပြီးပြီဆိုပါက။ မိမိ Drawing တစ်ခုကို စတင်ဖန်တီးတော့မည့်အချိန်တွင် ၎င်း Template ဖြင့် Drawing တစ်ခုကို အစပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Drawing Template သည် AutoCAD တွင် New Drawing တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တိုင်း အသုံးပြုရမည့် File ဖြစ်ပါသည်။ Drawing တစ်ခုကို New ပြုလုပ်လိုက်တိုင်းတွင် Create New Drawing (သို့) Selectatemplate dialog box များကျလာခြင်းသည် Template များကို ရွေးခြယ်ခိုင်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍မိမိအသုံးပြုရန် ဖန်တီးထားသော Template တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ပါက New Drawing ခေါ်ရာတွင် AutoCAD ၏ Default template များဖြစ်ကြသော acad.dwt နှင့် acadiso.dwt များအစားမိမိ၏ Template file ကို ခေါ်ယူဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ Select Template Dialog Box Template ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပြန်လည်အသုံးချခြင်းများသည် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတွင် အသုံးတည့်သဖြင့် ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်စေရန်အတွက် လေ့လာထားသင့်ပါသည်။ ထပ်မံ၍ လေ့လာထားသင့်သည်များမှာ Hyperlink များနှင့် OLE Objects များအကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ Hyperlink မိမိရေးဆွဲထားသော Drawing File တစ်ခုရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊ Drawing File တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ အခြားသော Application အသုံးပြုထားသည့် File များဖြင့် အလွယ်တကူချိတ်ဆက် ထားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မိမိရေးဆွဲထားသော 2D Table ပုံတစ်ခုနှင့် ၎င်းကို ကိုယ်စားပြုထားသော မူရင်း ဓာတ်ပုံ File တစ်ခုတို့ကို ချိတ်ဆက်ထားသည်ဆိုပါက ၊ ၎င်း Table Drawing Object ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်သည်နှင့် ဓာတ်ပုံ Application တစ်ခု ပေါ်လာကာ မိမိချိတ်ဆက်ထားသော ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Hyperlink တစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် မိမိ ရေးဆွဲထားသော Drawing တစ်ခုအတွင်းမှ ချိတ်ဆက် လိုသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို Select ပြုလုပ်ပြီး Insert Menu အတွင်းမှ Hyperlink ( Ctrl+K) ကိုအသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Hyperlink ရွေးချယ်ပြီးနောက် Select Object ရွေးခြင်းအဆင့်တွင် မိမိချိတ်ဆက်လို သည့် Drawing Object ကို Select ရွေးချယ်ပြီးနောက် ထပ်မံပေါ်လာသော Insert Dialog Box တွင် Browse for တွင် File ကိုရွေး၍သော်လည်းကောင်း၊ Web page များကိုချိတ်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Insert Hyperlink Dialog Box Hyperlink ချိတ်ဆက်ထားသော Object အပေါ်သို့ Mouse Cursor ကိုရွေ့ကြည့်လိုက်လျှင် Link ရှိနေကြောင်းပြသသည့် ကမ္ဘာလုံးပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ၎င်း Link ရှိနေသော တည်နေရာ File Location ကိုပြသပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို ဖွင့်လိုလျှင် Ctrl+Click နှိပ်၍ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ Hyperlink သည် Computer အတွင်းရှိ မည်သည့် Application files များနှင့်မဆို ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ OLE Object OLE (Object Linking & Embedding) သည် Hyperlink နည်းတူပင် Drawing တစ်ခုအတွင်းသို့ External Files များကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Hyperlink နှင့်မတူညီသောအချက်မှာ Link တစ်ခုသတ်သတ်မဟုတ်ပဲ Drawing အတွင်းတွင် Files များကိုတိုက်ရိုက် ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ထို့အတွက် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ AutoCAD Drawing Files အတွင်း ချိတ်ဆက်ပြသ နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် File အမျိုးအစားမှလွဲ၍ အခြားသော Files များကို ပြသပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ OLE ကိုထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် Insert Menu အတွင်းရှိ OLE Object ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။ Inset Object Dialog Box OLE Object များအဖြစ် Files အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သလို၊ ပြုလုပ်ပြီးသား Files များကိုလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် Microsoft Files များကိုထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။ အသစ် ဖန်တီးလိုပါက Create New ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဖန်တီးထားပြီးသားဖိုင်များကို ထည့်သွင်းလိုပါက Create from file ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ OLE ဖြင့် ထည့်သွင်းထားသော Files များကို Drawing အတွင်းတွင် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို ပြုပြင်လိုပါက Double Click နှိပ်ရုံဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ Application ကိုဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်စရာများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး(PHYO Training Institute)
Internet Journal Vol.18 ,No.10 , March 6,2017 Written By Aung Pye Phyo. Gmail သည် E-mail အသုံးပြုသူများအကြားတွင် ရေပန်းစား အသုံးများခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးတွင်သာမက Personal mail များအဖြစ် Gmail ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံး ပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လုံခြုံမှုအတွက်လည်း အစီအမံများစွာ ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့အစီအမံများစွာထဲမှ အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေသင့်တော်မည့် လုံခြုံရေး နည်းလမ်း များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။ 1. Password Security အသုံးပြုသူတိုင်း မဖြစ်မနေပြုလုပ်ထားသင့်သည်မှာ မိမိ Account ၏ Password လုံခြုံမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်စေမှု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အပတ်များတွင် Password Security နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အ လက်များကို ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ယခု Gmail အသုံးပြုသူများအတွက် Password Security ပိုင်းများတွင်လည်း ထိုနည်းတူပင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် သိရှိထားသင့်သည်မှာ Gmail password သည် Google Account Password ပင်ဖြစ်ပြီး Google မှပေးထားသည့် များပြားလှသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ Password တစ်ခု Strong ဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး Capital Letter ၊ Number ၊ Special Characters များပါဝင်သင့်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် မိမိ၏ Gmail Password သည် အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုခြင်းမရှိသော Password ဖြစ်ရန်လိုပြီး ရန်ဖန်ရန်ခါ ပြောင်းလဲပေးရန်လိုပါသည်။ ထိုသို့သောပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် Reset နှင့် Recovery Options များကိုလည်း မှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဦးစွာ Password ကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် Account Setting ထဲသို့သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Account Setting ၎င်းနောက် Sign-in & Security ထဲသို့ထပ်မံသွားရောက်ရမည်။ထိုအခါတွင် Password & Sign-in Method ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Sign in & Security Sign in Method ၎င်းတွင် Password ပြောင်းလဲခဲ့သည့် နောက်ဆုံး ရက်စွဲကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲလိုပါက ၎င်းကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအောက်တွင် 2-Step Verification ကဏ္ဍပါရှိပြီး Account ကိုပိုမို လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုလိုသူများအတွက် စီစဉ်ထားနိုင်သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ Account Recovery Options တွင် မိမိအတွက် အရံ E-mail ထားရှိထားရန်လိုအပ်ပြီး Phone No. ကိုထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Account Recovery Options 2.2Steps Verification အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိ၏ E-mail ကိုပိုမို၍ လုံခြုံစိတ်ချစေလိုလျှင်2Step Verification ကိုအသုံပြုနိုင်ပါသေးသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။2steps verification ၎င်းတွင် မိမိ E-mail သို့ အသုံးပြုရန်ဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်းတွင် Password အပြင် Verification code ပါလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မိမိ၏ဖုန်းသို့ Google မှ Text Message ဖြင့်ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရရှိလာသော Code ကိုအသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင်း ၎င်းကို2Step Verification ဟုခေါ် ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Get Started ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ မိမိ Account Password ကိုပြန်လည်တောင်းခံလာပါက ထည့်ပေးပါ။ ၎င်းနောက် Phone Setup လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။ Phone Setup 1 ၎င်းတွင် မိမိအသုံးပြုနေသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ Code ရယူလိုသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Text Message ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါတွင် Google မှ Phone Verification အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိကို စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် မိမိ၏သတ်မှတ်ထားသော Phone သို့ Code ကို Message ဖြင့်ပေးပို့လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် ရိုက်ထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Phone Setup2Code ကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီးပါက Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Phone Setup3ထိုအခါ Verification လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ပြီဖြစ်သဖြင့် Turn On ကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ 3. Check activities မိမိ လုပ်ဆောင်ချက်များ ၊ Gmail သို့ဝင်ရောက်ခဲ့မှုများစသည့် Activity များကိုလည်း Check လုပ်ရန် လိုအပ် ပါက Account Setting Page ရှိ My Activity တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးသည် Check Activities ၎င်း ကဏ္ဍတွင် ရက်စွဲအလိုက် မိမိ Account ဖြင့် Sign in ဝင်ရောက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအပြင် အခန်းကဏ္ဍများခွဲခြားထားပြီး မိမိအသုံးပြုခဲ့ခြင်းများ၊ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းများ၊ Play Store ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ You Tube ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Google မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် Products များအားလုံးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။၎င်း ကဏ္ဍတွင် ရက်စွဲအလိုက် မိမိ Account ဖြင့် Sign in ဝင်ရောက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအပြင် အခန်းကဏ္ဍများခွဲခြားထားပြီး မိမိအသုံးပြုခဲ့ခြင်းများ၊ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းများ၊ Play Store ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ You Tube ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Activities Google မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် Products များအားလုံးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက် မိမိအမှန်တက်ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ သိရှိနိုင်မည့်အပြင် လိုအပ်ပါက ထပ်မံ၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော အစီအမံများကို ချမှတ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော ကဏ္ဍများကိုလည်း ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်သင့်ပါကြောင်း။ အောင်ပြည့်ဖြိုး (PHYO Training Institute)
“Office Essentials – Business Presentation အတွက်လေ့လာထားသင့်သည်များ”
Presentation သည် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် လွန်စွာအရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍအဖြစ် ပါဝင်နေပြီဖြစ်ရာ မိမိကုန်ပစ္စည်းအတွက်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးပွဲများတွင်လည်းကောင်း၊ လုပ်ဆောင်မှုကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာသဘောပေါက်နိုင်စေရန် အသုံးပြုနေကြသည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ Presentation ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလေ့လာထားသင့်သည်များကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ Presentation တစ်ခုဖြစ်မြောက်စေရန်အတွက် အောက်ပါ ကဏ္ဍများ လိုအပ်ပါသည်။ 1. Presentation Planning 2. Slide Master and Templates 3. Graphical Objects 4. Charts and Diagrams 5. Multimedia 6. Enhancing Productivity 7. Managing Presentations 1. Presentation Planning Audience & Environment ဤကဏ္ဍတွင် အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ Presentation ကြည့်ရှုမည့်သူများ၏ Demography ကိုသိရှိထား ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းမှာ အသက်အရွယ်၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်၊ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းအပြင် Presentation ပြုလုပ်မည့်နေရာ၏ Lighting အနေအထား၊ Presentation ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများအခြေအနေ၊ အခန်းပမာဏ၊ နှင့် Layout အပြင်အဆင်တို့ကိုလည်း သိရှိနားလည်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Design, Content & Layout Presentation တစ်ခု၏ ကြာချိန်နှင့် ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်သည်လည်း အရေးကြီးသည်။ မိမိရရှိထားသော သတ်မှတ်သည့်အချိန်တစ်ခုအတွင်း ပြီးစီးနိုင်မည့် Presentation တစ်ခုကိုဖန်တီးထားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းအပြင် Slide တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကြာချိန်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ကြာချိန် တူညီမည်မဟုတ်သဖြင့် မိမိပေးလိုသည့် Information ကို ရရှိနိုင်လောက်သည့် ကြာချိန်ဖြစ်ရန် လိုသည်။ Presentation Slide တစ်ခုတွင်အသုံးပြုမည့် စာသားများနှင့် ရုပ်ပုံများကိုလည်း ပေးလိုသည့် သတင်း အချက်အလက်ဖြစ်စေရန် အလေးထားပြင်ဆင်ထားရမည်။ ကြည့်ရှုမည့်သူများ၏ အသက်အရွယ်၊ အလုပ်အကိုင်များပေါ်မူတည်၍ ၎င်းအချက်ကို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထက်ပါ အကြောင်းကိစ္စရပ်များသည် Presentation တစ်ခုပြုလုပ်မည့်သူများအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားစရာများဖြစ်ပါသည်။ 2. Slide Masters and Templates Slide Masters ၎င်းသည် Presentation Slide တစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မည်ဆိုလျှင် အလွန်အသုံးဝင်သည့် ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ပြုလုပ်မည့်သူသည် Presentation slides ပေါင်းများစွာကို ပြုလုပ်ရန်ရှိသည်ဆိုပါက Slide တစ်ခုချင်းစီအတွက် Text Styles များ၊ Fonts Styles များ၊ ကဏ္ဍခွဲခေါင်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်သည့် အပြင်အဆင်များကို တစ်ခုစီတွင် လိုက်လံပြင်ဆင်စရာမလိုအပ်ဘဲ ၎င်း Slides Master အတွင်းတွင် ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ထားယုံဖြင့်၊ Slides များအားလုံးတွင် အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် View Tab အတွင်းရှိ Master Views ကဏ္ဍတွင်ရှိသော Slide Master ကိုရွေးပြီး ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်သည်။ Master View Icon ၎င်းမှ Slide Master ကိုရွေးခြယ်လိုက်ပါက Edit ပြုလုပ်နိုင်မည့် View တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ပြီး မိမိမှ အလိုရှိသည့် နေရာအလိုက် ပြုပြင်မှုများကို ကြိုတင်ဖန်တီးထားနိုင်သည်။ အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ Slide Master Example မိမိအလိုရှိသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ပြီးပါက ၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Close Master View ဖြင့် ပြန်လည်ပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။ Slide Master ကဏ္ဍအတွင်း ပြုပြင်ဖန်တီးထားနိုင်သည့်အချက်များမှာ Title Master , fonts , bulleted list format , background colour and fill effects , placeholder position များပါဝင်သည်။ Templates Templates များသည် Application တိုင်းလိုလိုတွင် မရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်ဖြစ်ရာ Presentation တစ်ခုပြုလုပ်ရာတွင်လည်း Template သည်လည်းအရေးပါလှသည်။ ၎င်းသည် မိမိပြုလုပ်ဖန်တီး မည့် Presentation တိုင်းတွင် ပါဝင်မည့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းသိုမှီးထားရာ File တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊ မိမိ Presentation တစ်ခုပြုလုပ်မည့်အခါတိုင်းတွင် အလွယ်တကူ ပြန်လည်ဖွင့်ကာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Template တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖန်တီးရန်အတွက် မိမိအသုံးပြုနေကျဖြစ်သော Text Setting များ၊ Placeholders များအပါအဝင် ၊ ကိစ္စရပ်အသီးသီးတို့ကို အရင်ဆုံး ဖန်တီးပြုလုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိပြုလုပ်နေကျအတိုင်းဖြစ်စေ၊ Slide Masters များကိုအသုံးပြု၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ဖန်တီးပြီးပါက ၎င်း file ကို Template file အဖြစ် သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မိမိလိုအပ်သည့် Setting များချမှတ်ပြီးသည် ဆိုပါက File Menu အတွင်းမှ Save as နှိပ်ပြီး Template တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Save as template New Template Template file အဖြစ်သိမ်းဆည်းလိုပါက PowerPoint template (*.potx) file အဖြစ် ရွေးခြယ်သိမ်းဆည်း ရမည်ဖြစ်ပြီး ။ ၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါက Power Point ကို ဖွင့်လျှင် ဖွင့်ချင်း New ကဏ္ဍအတွင်းရှိ Personal Templates စာရင်းတွင် မိမိပြုလုပ်ထားသော Template Files များကို ရွေးချယ်ကာ ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Template တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုလျှင် New ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ ၎င်းတို့ကိုပြုပြင်လိုလျှင် Open ဖြင့်ဖွင့်ကာ ပြုပြင်လိုသမျှပြုပြင်ပြီးပါက ၎င်း file ကို Save As ဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်း ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 3.Graphical Objects Creating Drawn Objects Presentation တစ်ခုကိုဖန်တီးရာတွင် Graphical ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံများကို ဖန်တီးနိုင်ရုံသာမက၊ အခြားသော Graphic Formats အများအပြားကိုလည်း Import ထည့်သွင်းနိုင်သေးသည်။ Drawn Objects များကိုလည်း မိမိအလိုရှိသည့် ပုံစံများကို Shapes Tools များအကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲနိုင်သလို လိုအပ်သည့် Effects များကိုလည်း Home Tab အတွင်းရှိ Drawing ကဏ္ဍတွင် ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်သည်။ Shapes Creation ၎င်းအပြင် အခြားသော Transparency effects များကိုလည်း ထည့်သွင်းပြုလုပ် နိုင်သလို 3D Effects များစွာကိုလည်း Shape Effects ကိုအသုံးပြုပြီး ဖန်တီးနိုင်သည်။ မိမိဖန်တီးထားသော Drawn Objects များဖြစ်သော Shapes Design များအတွင်းမှ Effects များကိုလည်း အခြားသော Drawn Objects များပေါ်သို့ Format Painter ကိုအသုံးပြုပြီး Effects များကို အလွယ်တကူ ကူးယူနိုင်သည်။ Format Painter Formatting Pictures , Images မိမိထည့်သွင်းထားသော ဓာတ်ပုံများကို လိုအပ်သော အလင်းအမှောင်၊ Contrast ၊ Color Adjustment ၊ Artistic Effects များကိုဖြစ်စေ၊ ထည့်သွင်းထားသော ပုံ၏ နောက်ခံ Background များကိုဖျက်လိုသည်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းထားသော ပုံကို Select ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပေါ်လာသော Picture Tools ရှိ Format Tab တွင်ရှိသော Adjust ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်ပြုပြင်နိုင်ပါသေးသည်။ Adjustment Tools Handling Graphical Objects Graphical Objects များကိုကိုင်တွယ်ရာတွင် မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေ့ပြောင်းနိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် Fridlines , Guides , Ruler များကို View tab အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ Check box များကိုပိတ်/ဖွင့်ခြင်း ပြုလုပ် နိုင်သည်။ ၎င်းအပြင် Snap အဖြစ်အသုံးပြုလိုပါကလည်း Snap objects to grid ကို Grid & Guides Setting တွင် ဝင်ရောက်ပြုလုပ်ထားနိုင်သည်။ ပုံများကို ရွေ့ရာတွင်လည်း Horizontal (သို့) Vertical Co-ordinate များဖြင့်နေရာ ချထားပြောင်းရွေ့လိုပါကလည်း ပုံကို Select ပြုလုပ်ပြီး ပေါ်လာသော Format Tab အတွင်းရှိ Size ကဏ္ဍတွင် ရှိသော Setting Dialog Box Launcher ကိုရွေးခြယ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးသည်။ Size Icon Position Box ထပ်မံ၍ပုံပြင်ဆင်သည့်ပိုင်းဆိုင်ရာ များအတွက် လေ့လာထားသင့်သည်များမှာ မိမိထည့်သွင်းထားသော ပုံများကို ချုံ့ချဲ့ပြုလုပ်ရာတွင် Image Aspect များကို ပြောင်းလဲမှု မရှိစေရန်အတွက် Lock ချခြင်းများ၊ Crop ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ Drawn Object တစ်ခုကို အခြားသော Graphic Format တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းများ၊ Graphical Object တစ်ခုကို အခြားသော Application များတွင်အသုံးပြု နိုင်စေရန်အတွက် Export ပြုလုပ်ခြင်းများသည် လည်း အသုံးဝင်အရေးပါသည့်အတွက် ဆက်လက် လေ့လာထားသင့်ပါသည်။ 4.Charts and Diagrams ဤကဏ္ဍတွင် မိမိပြုလုပ်ဖန်တီးမည့် Presentation တစ်ခုအတွင်း Charts များနှင့် Diagrams များကို ထည့်သွင်းခြင်းများပါဝင်ပါသည်။ Presentation တစ်ခု၏ ဖော်ပြချက်များကို ရုပ်ပုံများနှင့်ဖြစ်စေ ၊ တိုးတက်မှု အလားအလာ၊ အညွှန်းကိန်းများကို Charts များဖြင့်လည်းဖော်ပြလေ့ရှိကြရာ လေ့လာထားသင့်သည့် ကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။ Excel ကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုသကဲ့သို့ပင် Presentation တွင်လည်း မိမိထည့်သွင်းလိုသည့် Chart အမျိုးအစားကို Insert Tab အတွင်းရှိ Chart ကိုအသုံးပြုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းထည့်သွင်းထားသော Chart များအတွက် Data ထည့်သွင်းမှုကိုမူ ထည့်သွင်းလိုက်သော Chart ကို Select ပြုလုပ်ထားရုံနှင့်ပင် Excel windows ပေါ်လာကာ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အောက်ပါ ပုံကိုကြည့်ပါ။ Charts ထည့်သွင်းလိုက်သည့် Chart နှင့်အတူ Excel Data sheet ပါ တစ်ပါတည်း ပေါ်လာသည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Chart နှင့်ပတ်သက်သော Elements များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုပါက Design Tab အတွင်းရှိ Add chart element ကိုအသုံးပြု၍ ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ပုံကိုကြည့်ပါ။ Chart Element Chart types များကိုသတ်မှတ်ထားသည့် Data Series များနှင့်အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုပါကလည်း Chart Tools Design Tab ရှိ Change Chart Type တွင် ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ Excel တွင်အဓိကအသုံးပြုသည့် ၎င်း Chart များသည် Excel အသုံးပြုခြင်း ကျွမ်းကျင်နားလည်ထားသူများအတွက် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာပင် ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Diagrams Built in options ကိုအသုံးပြု၍ဖြစ်စေ အခြားသော Drawing tools များဖြစ်သော Flowchart , cycle , pyramid များကိုအသုံးပြု၍ဖြစ်စေ Diagrams များကိုဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Process , Cycle (သို့) Pyramid များကို သက်ဆိုင်ရာ SmartArt များကို Insert Tab အတွင်းတွင် ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။ SmartArt Graphic ၎င်းအပြင် Flowchart အတွင်း လိုအပ်သည့် Connector များကိုထည့်သွင်းလိုပါကလည်း Insert Tab အတွင်းရှိ Illustration group အတွင်းရှိ Shapes များကိုအသုံးပြုဖန်တီးနိုင်ပါသေးသည်။ ၎င်းဖန်တီးထားသော Connector အမျိုးအစားများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုပါကလည်း ၎င်း Connector ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး Connector types ကိုရွေးခြယ်ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 5.Multimedia Presentation တစ်ခုဖန်တီးတည်ဆောက်ရာတွင် Multimedia များဖြစ်သော Movies များ ၊ Sound များ၊ Animation များ ကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးသည်။ Movies နှင့် Sounds များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက် Insert Tab အတွင်းရှိ Video နှင့် Sounds ကိုရွေးခြယ်ပြီး ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် Screen recording များကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်သဖြင့် အသုံးတည့်ပါသည်။ Insert Media ၎င်းထည့်သွင်းထားသော Video နှင့် Sound များအတွက် Automatically play နှင့် Mouse click play များအတွက်လည်း Video/Audio Tools Playback Tab အတွင်းရှိ Video/Audio option Drop down list အတွင်း ရွေးခြယ်နိုင်ပါသည်။ Animation များကို ထည့်သွင်းလိုပါက Animation Tab အတွင်းရှိ Add Animation ကိုအသုံးပြုပြီး ထည့်သွင်းဖန်တီး တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ဖန်တီးထားသော Animation များအတွက် Effects များအတွက်လည်း Animation ကဏ္ဍအတွင်းရှိ Effects Options ကိုအသုံးပြုဖန်တီးနိုင်ပါသေးသည်။ ၎င်းအပြင် Charts elements များကို Series အလိုက် Animation ပြုလုပ်ခြင်း၊ Category အလိုက်ဖြစ်စေ၊ Series အလိုက်ဖြစ်စေ Animation ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်ပါသေးသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအတွက် Animation ကဏ္ဍအတွင်းရှိ Chart Animation Tab တွင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 6.Enhancing Productivity မိမိဖန်တီးထားသော Presentation တစ်ခုအတွင်းရှိ ပုံများ၊ စာအစိတ်အပိုင်းများ စသည်တို့အတွက် Link များနှင့် Embedding များပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို Insert Tab အတွင်းရှိ Hyperlink ကိုအသုံးပြုဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ပြင်ပ File တစ်ခုခုကို Presentation Slide အတွင်းသို့ Embed Object အဖြစ်ထည့်သွင်း အသုံးပြုလိုပါကလည်း Insert Tab အတွင်းရှိ Text ကဏ္ဍတွင်ရှိသော Object ကိုအသုံပြု ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ထည့်သွင်းထားသော File တစ်ခုကို Icon အဖြစ်ဖော်ပြစေလိုလျှင်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်ကတည်းက Display as icon ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားခဲ့နိုင်ပါသည်။အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Insert Object မိမိဖန်တီးထားပြီးသား Slides များကို လက်ရှိဖန်တီးနေသော Presentation file အတွင်းသို့ ပြန်လည် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလိုပါကလည်း Home Tab ရှိ New Slide တွင်ပါရှိသော Down-arrow ကို နှိပ်ပြီး Reuse Slide ကိုအသုံးပြုဖန်တီးနိုင်သည်။ Reuse ကိုရွေးခြယ်ပြီးနောက် မိမိထည့်သွင်းလိုသည့် Slide ရှိသော File ကို Browser ဖြင့်ရွေးခြယ်ကာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Reuse Slide Box ၎င်းအပြင် Word-Processing ဖြင့်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော Outline များကို လက်ရှိ Slide အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းဖန်တီးလိုပါကလည်း Home Tab အတွင်းရှိ New slide down-arrow ကိုရွေးခြယ်ပြီး ၎င်းအတွင်းရှိ Slide from Outline ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိ Outline အဖြစ်အသုံးပြုလိုသည့် File ကိုရွေးခြယ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Outline Exporting အနေဖြင့် မိမိပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော Slide တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အတွင်းမှ တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ပြင်ပ Format များအဖြစ် Export ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် မိမိ Export ပြုလုပ်လိုသော Slide ကို Select ပြုလုပ်ပြီး F12 ကိုနှိပ်ကာ Export ပြုလုပ်လိုသည့် File အမျိုးအစားကို Save as type list အတွင်းတွင်ရွေးခြယ်ကာ ပြုလုပ်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ 7.Managing Presentation Presentation တစ်ခုဖန်တီးမှုပြီးစီးပြီဆိုပါက ၎င်းကို Finalize ဖော်ပြမှုများအတွက် လိုအပ်သည့်အချက် များကိုပြင်ဆင်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Presentation အတွက်ပြင်ဆင်ထားရှိသော Slide အားလုံးထဲမှ အချို့သော Slide များကိုသာ သီးသန့်ပြသနိုင်ရန်အတွက်လည်း Custom Slide show အဖြစ်အမည်ပေးကာ သတ်မှတ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် Slide Show Tab မှ Start Slide Show Group အတွင်းရှိ Custom Slide Show ကိုရွေးခြယ်ကာ ၎င်းတွင် မိမိပေးလိုသော အမည်ကိုပေး၍ Slide များကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းနောက်တွင် Transition များသတ်မှတ်ခြင်း၊ Transition များ၏ကြာချိန်သတ်မှတ်ခြင်းများ နှင့် Slide တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား ကြာချိန်များ၊ Automatically သွားခြင်းနှင့် Mouse Click ပေး၍သွားခြင်း စသည့် ပြသခြင်းဆိုင်ရာများကိုလည်း သတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ဆင်မှုများအတွက် Slide Show Tab အတွင်းရှိ Setup Slide Show ကဏ္ဍတွင် ပြင်ဆင်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Setup Slide Show Slide show ပြသနေစဉ်အတွင်း Pen (သို့) Pointer ကိုအသုံးပြုပြီး လိုအပ်သည့် Annotation များကိုဖန်တီးလိုပါက Start Slide Show ကိုနှိပ်ပြီး Slide ပြသနေစဉ် လိုအပ်သည့် Slide ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး Pointer Options ရှိ Pen , Laser Pointer , Highlighter တို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။ Painter Option Presentation ပြသနေစဉ်အတွင်း Screen ကို Black (or) White Screen အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး Pause ပြုလုပ်ခြင်းများ End ပြုလုပ်ခြင်းများကိုလည်း Right click menu အတွင်းရှိ Screen တွင်ဝင်ရောက် ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Presentation နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အသုံးချပုံများသည်လည်း များပြားလှသည်ဖြစ်ရာ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များကို သိရှိနားလည်ပိုင်နိုင်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သိရှိ နားလည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ ECDL/ICDL International Exam ဝင်ရောက်ဖြေဆိုလိုသည်ဖြစ်စေ လွယ်ကူစေရန် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး (PHYO Training Institute)
Office Essentials - Business Excel အကြောင်းလေ့လာထားသင့်သည်များ (၂)
-FV : [=FV(rate,nper,pmt)] -PV : [=PV(rate,nper,pmt)] -PMT : [=PMT(rate,nper,pv)] Financial ပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများအတွက် Future Value (FV) နှင့် Present Value (PV) Functions များကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် arguments များအဖြစ် rate , nper နှင့် pmt တို့ပါရှိပြီး ၎င်းတွင်ရှိသော rate သည် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွက် Interest rate ဖြစ်ပြီး nper သည် number of payment ဖြစ်ကာ pmt argument သည် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးရမည့် rate ဖြစ်သည်။ PMT Function သည် ချေးငွေအတွက် အခါအားလျော်စွာပေးသွင်းရမည့် ပုံသေ payment ကိုတွက်ချက် ရာတွင်အသုံးပြုသည်။၎င်းတွင် ပါရှိသော argument များသည် အထက်တွင်ဖော်ပြချက်များနှင့် တူညီပြီး FV Function ကို PMT တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်။အောက်ပါ ပုံကိုကြည့်ပါ။ ချေးငွေ Amount တစ်ခုအတွက် Monthly Payment တွက်ချက်ပုံကိုဖော်ပြထားပါသည်။ PMT value များသည် (-)Sign ဖြင့်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို ပျောက်စေလိုပါက PMT Function ရှေ့တွင် (-) Signs ခံ၍လည်းကောင်း pv တန်ဖိုးနေရာတွင် (-)Sign ခံ၍လည်းကောင်း ဖျောက်နိုင်ပါသည်။ PMT Function Example Lookup Functions -VLOOKUP : [=VLOOKUP(lookup_value, table_array , col_index_num,[range_lookup])] -HLOOKUP : [=VLOOKUP(lookup_value, table_array , row_index_num,[range_lookup])] မိမိရေးသွင်းထားသော စာရင်းတစ်ခုအတွင်းရှိ information တစ်ခုကိုရှာဖွေရာတွင် Lookup Function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖန်တီးထားသော Table Array ပေါ်တွင်မူတည်၍ Vertical Lookup(vlookup) အဖြစ်လည်းကောင်း Horizontal Lookup (hlookup) အဖြစ်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Lookup Function ၏ဖွဲ့စည်းအသုံးပြုပုံကို အောက်ပါပုံတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Lookup Function ကို argument ၃ မျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ lookup value , table array နှင့် column index number တို့ဖြစ်ကြသည်။ How's Lookup function work. Database Functions -DCOUNT: [=DCOUNT (database, field, criteria)] -DSUM: [=DCOUNT (database, field, criteria)] -DAVERAGE: [=DCOUNT (database, field, criteria)] -DMIN: [=DCOUNT (database, field, criteria)] -DMAX: [=DCOUNT (database, field, criteria)] ၎င်း Database Function များသည် ထည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များထဲမှ ရှာဖွေလိုသည့် အချက်များကို ရွေးချယ်စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဌာနအသီးသီးရှိ ဝန်ထမ်းစာရင်းပြုစုထားသည့် ဇယားထဲမှ မိမိအလိုရှိသည့် ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏လစာ အချက်အလက်များကို ရယူလိုပါကသုံးနိုင်သည်။ DCOUNT DCOUNT Function တွင် (D) သည် Database ကို ကိုယ်စားပြု၍ Count သည် မိမိရှာဖွေလိုသည့် အချက်အလက်များ၏ အရေအတွက်ကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် မိမိအလိုရှိသည့်အချက်အလက် များရှိနေသည့် Rows များကို ရေတွက်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ DCOUNTA ၎င်းသည် DCOUNT Function နှင့်ဆင်တူပြီး Blank မဟုတ်သော Values များကို ရွေးနှုတ်ပေးသည်။ DSUM ၎င်းသည် မိမိအလိုရှိသည့် အချက်အလက်များရှိနေသည့် rows များအတွင်းရှိ Fields များကိုပေါင်းပေးနိုင်သည်။ DAVERAGE , DMAX , DMIN ၎င်း Functions များသည်လည်း DSUM နည်းတူပင် Average ရှာခြင်း Maximum နှင့် Minimum ရှာခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ Using IF Function -IF : [=IF(logical test , action if true , action if false)] IF function သည် Excel အသုံးပြုသူများကြား မရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေကြရသည့် Function အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပြီး လွန်စွာအသုံးတည့်ပါသည်။ ၎င်း Function သည် if condition အခြေအနေအတွင်း မိမိအလိုရှိသည့် result တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာစေရန်သုံးသည်။ IF function နှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ Operators များကိုလည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ IF Operator အောက်ပါ ဥပမာတစ်ခုကို လေ့လာကြည့်လျှင် =IF(C3>50,D3*10%,0) ၎င်း statement တွင် အကယ်၍ C3 သည် 50 ထက်ကြီးသည်ဆိုပါက D3 တွင်ရှိနေသော Number တစ်ခုခုကို 10% မြှောက်စေပြီး၊ အကယ်၍သာ C3 သည် 50 ထက်ငယ်နေမည်ဆိုပါက0အဖြစ်သတ်မှတ်စေမည်ဖြစ်သည်။ Using Nested IF Function အသုံးများသည့် IF function ကို ထပ်မံချဲ့ထွင်၍ အသုံးပြုလိုသည်ဆိုပါက Nested နည်းစနစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Nested စနစ်သည် IF functions များကို ထပ်ဆင့်အသုံးပြုသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Nested IF function ကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။ =IF(logical test , action if true , IF(logical test , action if true, action if false)) Using an AND & OR Condition with IF ထပ်မံ၍ IF function ကို AND Condition နှင့်သော်လည်းကောင်း OR Contition နှင့်သော်လည်းကောင်းတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ တစ်ခုထက်ပိုသော Statement ပေးလိုခြင်းများအတွက် AND ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ “သို့မဟုတ်” Statement တစ်ခုအတွက် OR ကိုကြားခံအသုံးပြုနိုင်သည်။ 3-D Reference withinaSUM Function ၎င်းသည် Worksheets များအကြား ပေါင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ပုံမှန် SUM function ၏အလုပ်လုပ်ပုံအတိုင်းပင် Worksheets တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား အသုံးပြုနိုင်သည်။ Excel နှင့်ပတ်သက်သော functions များသည် များပြားလှပြီး အခြားသော functions များစွာလည်း ကျန်ရှိနေသေးသည်ဖြစ်ရာ မိမိလုပ်ငန်းခွင်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်မည့် Functions များကို လေ့လာထားသင့်ပါသည်။ 3. Charts မိမိ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် အခြေအနေများကို ဖော်ပြရာတွင် လေ့လာကြည့်ရှု့သူများ ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်နားလည် စေရန်အတွက် Data Table များအစား Chart များကို အသုံးပြု၍ အလွယ်တစ်ကူ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။ Chart Icon Group Charts များကို မိမိအလိုရှိသည့် ပုံစံဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း Charts များအတွင်းရှိ Data ဖော်ပြချက်များမှာ မိမိရေးသွင်းထားသော Cells များအတွင်းရှိ Data များဖြစ်သည်။ ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးသား Charts များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုပါက ၎င်း Chart ကို Select ပြုလုပ်ပြီး ပေါ်လာသော Design Tab မှ Change Chart Type ကို ရွေးခြယ်ကာ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။ Changing Chart types မိမိလက်ရှိပြုလုပ်ပြီးသား Charts များအတွင်း ဖော်ပြထားသော Data သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည် ပြုပြင်လိုပါကလည်း Select Data ကိုအသုံးပြုပြီး ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးခြင်းကိုလည်း သိရှိထားရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် Charts များ၏ နောက်ခံဒီဇိုင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းများကိုလည်း နားလည်သိရှိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Charts များနှင့်ပတ်သက်သော ဒီဇိုင်း အချက်အလက်များကို Format Tab တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သေးသည်။ Charts များကို လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီး၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသဖြင့် အရေးပါသော Excel Tools တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 4.Analysis ၎င်းကဏ္ဍတွင် အဓိကပါဝင်သည်များမှာ Table အသုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။မိမိထည့်သွင်းထားသည့် Data Table ထဲမှ အချက်အလက်များကို ရွေးချယ်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် Data Table တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် Pivot Table ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Pivot Table သည် များပြားလှသော Data ပမာဏများ ကို Categories များနှင့် Subcategories များအဖြစ် အလွယ်တကူဖော်ပြပေးနိုင်သဖြင့် Data များကို Organise ပြုလုပ်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ အကျဉ်းချုပ် ဖန်တီးရာတွင်ဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု သိရှိစေနိုင်ရန် အကူအညီပေးသည်။ Pivot Table ရှိအကျဉ်းချုပ်စာရင်းများကို ကြည့်ရှုရာတွင် rows to columns များအဖြစ်လည်းကောင်း column to rows များအဖြစ်လည်းကောင်း အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Pivot Table တစ်ခုကို မပြုလုပ်မီ သိရှိထားရမည့် အချက်များမှာ- Data table တစ်ခုရှိ ထိပ်ဆုံး Top row သည် Column headers ပါဝင်နေရမည်။ Data table အတွင်းရှိ row အသီးသီးသည် သက်ဆိုင်ရာ တိကျသေချာသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ရမည်။ Data table တစ်ခုအတွင်းရှိ Column များရှိအချက်အလက်များသည် information အမျိုးအစား တူညီရမည်။ Blakn row နှင့် column များပါဝင်နေခြင်းမရှိရပါ။ - အကယ်၍ Column တစ်ခုတွင် Blank အဖြစ်ထားရှိလိုပါက တန်ဖိုး (0) ထားရှိရမည်။ ၎င်း Pivot Table တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုပါက Insert Tab အတွင်းရှိ Pivot Table icon ကိုနှိပ်ပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါဥပမာများကို လေ့လာကြည် ပါ။ Need Data for Pivot Table Example of pivot table Pivot Table Fields 5. Validating & Auditing ၎င်း ကဏ္ဍတွင် မိမိဖန်တီးထားသော စာရင်းဇယားများကို မှန်ကန်မှုရှိမရှိ၊ Error ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ Formula များကို ဖော်ပြစစ်ဆေးခြင်း၊ Auditing ပြုလုပ်ခြင်း၊ Comment များနှင့် Notes များ ရေးသားခြင်းများ ပါဝင်သည်။၎င်း တို့ကို ပြုလုပ်ဖန်တီးခြင်းများအတွက် Data Tab မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 6. Enhancing Productivity ၎င်းကဏ္ဍတွင် မိမိပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော စာရင်းဇယားများကို Print ထုတ်ယူခြင်း၊ Export ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ Cell Ranges များကို အမည်ပေးခြင်း၊ ပြန်ဖျက်ခြင်း၊ Paste Special များ အသုံးပြုခြင်း၊ Template များအသုံးပြုခြင်း၊ Linking & Embedding စနစ်အသုံးပြုခြင်း၊ Delimited data များကို Text files များမှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းခြင်း ၊ Automation စနစ်ဖြစ်သော Macro များကိုအသုံးပြုခြင်းများပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုလည်း Excel အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် နားလည်တတ်မြောက်ထားသင့်သည်။ 7.Collaborative Editing ၎င်းကဏ္ဍအတွက် Tracking ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ Workbook ကို Protect ပြုလုပ်ခြင်းများ ပေါင်းစပ် ပါဝင် နေသည်။ ၎င်းအတွက် မိမိပြုလုပ်ထားသော စာရင်းဇယားအတွင်းရှိ Data များကို Tracking ပြုလုပ်နိုင်ရမည် ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သလိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကဏ္ဍအတွက် Review Tab ကိုအသုံးပြုပြီး လိုအပ်သည့် Formula ပြောင်းလဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းများ Spelling စစ်ဆေးခြင်းများ Data Entry များ မှန် မမှန် စစ်ဆေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပြီး အချောသတ်အဆင့်ရောက်အောင် ဖန်တီးခြင်းများမှာ Excel အသုံးပြုနေသည့် User တိုင်းအတွက် မသိမဖြစ်သိရှိထားသင့်သည့် အချက်များဖြစ်သဖြင့် လေ့လာထား သင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထက်ပါအချက်အလက်များအားလုံး ကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုလျှင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတွင်လည်း အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သလို ECDL/ICDL Foundation မှစစ်ဆေးပေးနေသည့် Spreadsheets International Exams များကိုလည်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး (PHYO Training Institute)
“Google User များအတွက် Contact များ Backup ပြုလုပ်ခြင်း”
Internet Journal Vol.18, No.11, March 13,2017 Written By Aung Pye Phyo Google user ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် Gmail အသုံးပြုသူများပါဝင်ပါသည်။ Gmail Account တစ်ခုသည် Google ၏ Account ပင်ဖြစ်ပြီး အတူတူပင်ဖြစ်သည်ကို သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Online အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ လူတိုင်းကိုယ်စီတွင် အနည်းဆုံး Google Account တစ်ခုစီရှိကြပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အတွက် Gmail Account တစ်ခုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကဏ္ဍများကို သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအသုံးပြုနိုင်သည့် Features များကိုလည်း ယခင် Learning Hub ကဏ္ဍများတွင် ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံ၍သိရှိလိုသူများအတွက် အောက်ပါပုံ ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Google Products များပြားလှစွာသော Google Products များကို Google Account ဖြင့်ပင် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသည်ဖြစ်ရာ မိမိအတွက်အသုံးတည့်မည့် အချက်များကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ပါမည်။ ဖုန်းနံပါတ်များ Backup ပြုလုပ်ခြင်း ယနေ့ခေတ် ဖုန်းအသုံးပြုသူ အများစုကြုံတွေ့နေရသည့်အချက်မှာ ဖုန်းပျောက်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ Reset ပြုလုပ်ခြင်း စသည်များကြောင့် ဖုန်းအတွင်းရှိ Data များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရခြင်းများစွာ ကြုံတွေ့နေရသည်များ တွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ဖုန်းနံပါတ်များ ပျက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Google Account တစ်ခုကို ဖုန်းအတွင်း ထည့်သွင်းထားရုံဖြင့် မိမိ၏ ဖုန်းအတွင်းရှိ အရေးကြီးသော ဖုန်းနံပါတ်များကို Google Server တွင် Backup ပြုလုပ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် မိမိအလိုရှိသည့်အချိန် အချိန်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုတွင် Google Account ဝင်လိုက်သည်နှင့် အလိုအလျောက် ဖုန်းအတွင်းသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် အသုံးပြုထားသင့်သည့် Features ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူတွင် Google Account ရှိထားရန်လိုပါသည်။ Android user များအတွက် ဦးစွာ မိမိဖုန်း၏ Setting>Account သို့သွားရန်လိုအပ်ပြီး Add Account ကိုနှိပ်ကာ Google ကိုရွေးချယ်ပြီး Account ထည့်သွင်းပေးပါ။ ထည့်သွင်းခြင်းပြီးဆုံးပါက အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Android Account Setting ၎င်းနောက် Google ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီး ၎င်း Account ဖြင့် Synchronize ပြုလုပ်ပေးမည့် အချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။ Sync Setting ၎င်းတွင် မိမိထည့်သွင်းထားလိုက်သည့် Google Account တစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အချက်များကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါက မိမိ၏ အရေးကြီးအချက်အလက်များအားလုံး Google Server တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် Sync တွင် အမှန်ခြစ် ခြစ်ထားရန်တော့ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်း Contacts များအားလုံးကို Gmail အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း Contacts ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး လိုအပ်သလို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သလို အလိုအလျောက်လည်း မိမိဖုန်းအတွင်းတွင် Update ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မိမိဖုန်းကို အသုံးမပြုတော့ပါက Google Account ကိုဖုန်းအတွင်းမှ ထွက်လိုက်သည်နှင့် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် Data များသည်လည်း အလိုအလျောက် ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ Contacts in Gmail Gmail ကို ကွန်ပျူတာအတွင်းမှ ဝင်ရောက်ပြီး ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Gmail စာသားဘေးတွင်ရှိသော Drop down arrow ကိုနှိပ်လိုက်ပါက အခြားသော ကဏ္ဍများပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် Contacts ကိုရွေးချယ်ပြီး မိမိသိမ်းဆည်းထားသည့် Contacts များကို ကြည့်ရှု ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ Contacts များကို ထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါက Add contact Tool အသုံပြု ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော “New Contact" ကိုလည်း အသုံးပြုဖြန်တီးနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ မိမိရေးသွင်းလိုသည့် အမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး “Add” ကိုနှိပ်ကာ Contact အသစ်ရေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းနောက် ရေးသွင်းထားသော Contact အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အခြားသောအချက်အလက်များအတွက် ၎င်း ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ ပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ၎င်းတွင် မိမိသတ်မှတ်ပေးလိုသည့် အမည်၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အခြားသော အချက်အလက်များကို ရေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ထပ်မံ၍ထည့်သွင်းလိုသည့် အချက်အလက်များအတွက် “Add” ကိုနှိပ်ပြီး ရေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ Contacts များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုအလိုက်မှတ်တမ်းထားနိုင်ပြီး Group ဖွဲ့စည်းထားလိုပါကလည်း ဘယ်ဘက် Menu တွင်ရှိသော “New Group” ကိုအသုံးပြုဖန်တီးထားနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ မိမိဖန်တီးလိုက်သော Group အသစ်ကို ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထည့်သွင်းလိုသည့် Contacts များကို အမှန်ခြစ်ပြုလုပ်ကာ ထို Group အတွင်းသို့ ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသေးသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် Google Account ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်ပြီး Android နှင့် iOS အသုံးပြုသူများအားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။ Android ဖုန်းများအသုံးပြုသူများအတွက်လည်း Google မှ Support ပြုလုပ်ပေးထားသည့် Services များစွာရှိသည့်အနက်မှ အထက်ဖော်ပြပါ Contact service သည် များစွာအသုံးတည့်ပါလိမ့်မည်။ ထပ်မံ၍လည်း အခြားသော အသုံးတည့် Services များကိုလည်း ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး (PHYO Training Institute)
Office Essential - Business Excel အကြောင်း လေ့လာထားသင့်သည်များ(၁)
ရုံးလုပ်ငန်းသုံး စာရင်းများတွက်ချက်မှုအတွက် အသုံးပြုရာတွင် အလွန်အသုံးဝင်သည့် Software အနေဖြင့် Microsoft Office Excel ကိုလူတိုင်းသိကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူအနေအားဖြင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ Microsoft Office Excel ကိုအသုံးပြုနေကြပါသည်။ ထို့အတွက် အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Microsoft Excel နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းစနစ်များကို ယခုတစ်ပတ်အတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ Microsoft Excel ပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စေဖို့ရာ အောက်ပါ ကဏ္ဍများကို ခွဲခြား သိရှိနားလည်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 1. Formatting 2. Functions and Formulas 3. Charts 4. Analysis 5. Validating and Auditing 6. Enhancing Productivity 7. Collaborative Editing များဖြစ်ကြသည်။ 1.Formatting ဤကဏ္ဍသည် အသုံးပြုသူများအားလုံးလိုလို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်သော Cells များနှင့် Worksheets များအကြောင်းကို သိရှိနားလည်ထားရန်လိုပါသည်။ Autoformat / table styles များကို Cell range များအတွင်းဖန်တီးနိုင်စေခြင်း နှင့် အခြားသော Additional formatting များကို cell content များအတွင်း ဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်းများကို သိရှိနားလည်ထားရမည်။ ၎င်းအပြင် Custom number formats များအတွက် မိမိလိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Worksheets မိမိအသုံးပြုသည့် Worksheets များကို Spreadsheets တစ်ခုအတွင်း Copy , Move များပြုလုပ်ခြင်း ကိုလည်း သိရှိနားလည်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် လက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားသော Windows တစ်ခုအတွင်း Data Validation များ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် အတွက် Split ပြုလုပ်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Split WIndows Right Click Menu ၎င်းအပြင် Excel Files အတွင်းရှိ Row , column , worksheets များကိုလည်း လိုအပ်သလို Hide လုပ်ခြင်းများ လည်း သိရှိနားလည်ထားရန် လိုပါသည်။ ၎င်းအတွက် မိမိ Hide ပြုလုပ်လိုသည့် Row, Column , Worksheets တစ်ခုခုကို Select ပြုလုပ်ပြီး Right Click နှိပ်ကာ Hide ကို ရွေးခြယ်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ဖန်တီး နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါကလည်း Unhide ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ 2.Function & Formulas ဤကဏ္ဍသည် Excel ၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ Excel အသုံးပြုသူများသည် မိမိလိုအပ်ချက် အရဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်အရဖြစ်စေ Functions များနှင့် Formulas များကို လိုအပ်သလို အသုံးချ နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက် အသုံးများသည့် Formulas များကို လေ့လာထားကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ Function များကိုအသုံးပြုရာတွင် မိမိအသုံးပြုမည့် Function Name များ၏နောက်တွင် =Functions/Formula() ခံ၍ အသုံးပြု သည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။Functions များနှင့် Formula များကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲခြားလေ့လာကြည့်လျှင်အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Date & Time Function -TODAY : [=TODAY()] -NOW : [=NOW()] -DAY , MONTH , YEAR [=DAY/MONTH/YEAR(Serial_Number)] မိမိပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော Excel worksheets အတွင်း အချိန်ကာလ၊ ရက်စွဲများနှင့် နေ့ရက် အချက်အလက်များအတွက် Date & Time Function ကိုအသုံးပြုပါသည်။ လက်ရှိရက်စွဲကိုဖော်ပြရာတွင် [=TODAY()] ကိုအသုံးပြုပြီး ၊ လက်ရှိအချိန်နှင့် ရက်စွဲကိုတစ်ပါတည်း ဖော်ပြလိုလျှင် [=NOW()] ကိုအသုံးပြုကာ၊ ရက် ၊ လ၊ နှစ် သီးခြား ဖော်ပြချက်များအတွက် [=DAY(Serial_Number)] , [=MONTH(Serial_Number)] , [=YEAR(Serial_Number)] အဖြစ် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ Serial Number များသည် date argument များဖြစ်ပြီး မိမိကောက်ယုူလိုသည့် Cell Number ဖြစ်ပါသည်။ ထို day , month , year Functions များသည် သက်ဆိုင်ရာ Number format များအဖြစ်သာ ဖော်ပြ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Mathematical Functions -ROUNDDOWN : [=Rounddown(number,num_digits)] -ROUNDUP : [=Rounup(number,num_digits)] -SUMIF :[=sumif(range,criteria, [sum_range])] မိမိထည့်သွင်းထားသော number digits များကို လိုချင်သည့် number digits အရေအတွက်နှင့် ဒဿမကိန်း ဖော်ပြချက်များအတွက် အတိုးအလျော့ပြုလုပ်ရာတွင် rounddown နှင့် roundup Functions များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Sumif Function ကိုမူ မိမိစာရင်းရေးသွင်းထားသော အချက်အလက်များထဲမှ အမျိုးအမည်တူ တစ်ခု၏ တန်ဘိုး စုစုပေါင်းကို ရှာရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားကွက်အတွင်းမှ “Sail City” ဟုအမည်ပါရှိသော အချက်အလက်များ၏ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးကို ရွေးနှုတ်ကာ ပေါင်းလိုသည်ဆိုပါက sumif Function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုရာတွင် =SUMIF(range,criteria,[sum_range]) ဟူ၍ အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပြီး Criteria အတွင်းရှိ Data ကို (“”)ခံကာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ ပုံကို လေ့လာ ကြည့်ပါ။ Statistical Functions -COUNTIF : [=COUNTIF(range,criteria)] -COUNTBLANK : [=COUNTBLANK(range)] -RANK : [=RANK(number,ref,[order]] Countif , countblank functions များသည် မိမိသတ်မှတ်ထားသည့် တန်ဘိုးများ(သို့) ထိုတန်ဖိုးများထက် နည်းသည့်အရေအတွက်နှင့် များသည့်အရေအတွက်များကို တွက်ချက်ရေတွက်ရာတွင် အသုံးပြုပြီး ၊ Blank Area Counting ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Rank functions မှာမူ မိမိပြုလုပ်ဖန်တီးထားသည့် စာရင်းဇယားအတွင်းမှ အချက်အလက်များကို level အလိုက် Ranking ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ပါပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Rank Function Example Text Functions -LEFT : [=LEFT(text,[num_chars]) ] -RIGHT:[=RIGHT(text,[num_chars]) ] -MID:[=MID(text,[num_chars]) ] -TRIM:[=TRIM(text.)] -CONCATENATE:[=(text1,[text2]….)] ၎င်း Text Functions များသည်လည်း အသုံးဝင်သောကဏ္ဍတွင်ပါဝင်လာပါသည်။ မိမိဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော Excel File အတွင်းရှိ Data များကို သတ်မှတ်ထားသော Cell အတွင်းတွင် ရွေးနှုတ် ဖော်ပြလိုလျှင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Left , right , mid Functions များအသုံးပြုထားပုံကိုဖော်ပြပါပုံတွင် လေ့လာကြည့်နိုင်ပါသည်။ Text Function Example အထက်ပါဥပမာကိုကြည့်မည်ဆိုပါက “Cell B” တွင် Left function ကိုအသုံးပြုထားပြီး “Cell C” တွင် Right Function ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းအပြင် မိမိဖန်တီးရေးသားထားသော Cell များအတွင်းမှ စာသာများတွင် ပါရှိနေသော Spaces များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန်အတွက် Trim Function ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။ Trim သည် စာသားများအတွင်းရှိ Space တစ်နေရာမှလွဲ၍ ကျန်သော Spaces များကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ Concatenate Functions သည် Cell နှစ်ခု အတွင်းရှိ အချက်အလက်များကို Cell တစ်ကွက်တွင် စုစည်း ဖော်ပြလိုပါက အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ First Name , Last Name ခွဲခြားမှုများအတွက် ပေါင်းစည်း ကောက်ယူရာတွင် လည်း သုံးနိုင်ပါသေးသည်။ အောက်ပါ ပုံကိုကြည့်ပါ။ Concatenate Function Example အပိုင်း (၂) ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါမည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး(PHYO Training Institute)
“ကွန်ပျူတာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းလမ်းများ”
Learning ကဏ္ဍတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံကို အပတ်စဉ်ရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့ရာမှ ယခုတစ်ပတ်မှစတင်ကာ ထပ်မံလေ့လာစရာများအဖြစ် “ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းလမ်းများ” အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သာမန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအပြင် System Administration ပိုင်းကိုလေ့လာလိုသူများ အတွက်လည်း သင့်တော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ “ Improving Your Computer Preformance – Virtual Memory” “Virtual Memory” Virtual Memory ဆိုသည်မှာ စက်တင်တပ်ဆင်ထားသော Hard Drive မှ Partition များ၏ နေရာတစ်ချို့ကို ရယူကာ ကွန်ပျူတာမှ လိုအပ်သောအချိန်တွင် ရယူသုံးစွဲနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားသော Memory အတုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို မိမိစက်တွင်း တပ်ဆင်ထားသော Memory ပမာဏကို ပြည့်အောင်စက်မှ အသုံးပြုလိုက်ပါက ထပ်မံလိုအပ်မည့် Memory ပမာဏကို ရယူသုံးစွဲနိုင်စေရန်အတွက် Computer Hard Drive အတွင်း နေရာတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို စနစ်တကျသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာသည် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်လာပါလိမ့်မည်။ မည်သည့် Windows Version ကိုမဆို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် (သို့) သတ်မှတ်ထားပြီးသားပမာဏကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Keyboard မှ Win-Logo + Pause Break ကိုတွဲနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အချို့သော Laptop Computer များတွင် Pause Break key ကို Fn Key ဖြင့် တွဲကာ နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါတွင် System Properties Windows ကျလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် မိမိကွန်ပျူတာတွင် တပ်ဆင်ထားသော CPU , Memory , Windows Version များကိုပါ စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း Windows ၏ ဘယ်ဘက်ထောင့်ရှိ Advanced System Settings ကို ဝင်ရောက်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း box မှ Advanced Tab သို့သွား၍ Performance ကဏ္ဍရှိ Settings ကို နှိပ်လိုက်က Performance Options ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှ Advanced Tab ကိုရွေးခြယ်လိုက်ပါက Virtual Memory ကဏ္ဍကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် မိမိစက်တွင် ကနဦး ပေးထားသည့် Viraual Memory ပမာဏကို မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှ Change ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Windows မှ အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိမိအနေဖြင့် ထပ်မံပေးထားလိုသော ပမာဏကို Manually ရိုက်ထည့်သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသေးသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရန်အတွက် Automatically manage paging file size for all drives ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက် Custom size ကိုရွေးခြယ်ပြီး Initial size (MB) နှင့် Maximum size (MB) နေရာတွင် မိမိထားလိုသော ပမာဏကို သတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရာတွင် မိမိ စက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော Hard Drive ၏ ကျန်ရှိနေသော ပမာဏကိုလည်း စစ်ဆေးရန်လိုပါသည်။ ၎င်း ပမာဏကို Selected drive နှင့် Space available နေရာတွင် မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော ပမာဏကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပမာဏများကို သတ်မှတ်ရာတွင် MB (Mega Byte) ဖြင့်သတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် 1GB ပေးအပ်လိုပါက (1000) သတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် မိမိပေးအပ်လိုသော ပမာဏကို Initial နှင့် Maximum နေရာများတွင် တူညီစွာ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ပေးပြီးပါက Set ကို နှိပ်ပြီး အတည်ပြုပေးလိုက်ပါ။ ထိုအခါတွင် Drive နှင့် Paging File Size နေရာတွင် မိမိသတ်မှတ်လိုက်သော ပမာဏများကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိစက်အတွင်းရှိနေသော Partitions များတွင် တစ်နေရာစီ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။ သတိပြုရာတွင် Virtual Memory သတ်မှတ်ခြင်းသည် မိမိစက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Hard Drive ၏ လွတ်နေသောနေရာတစ်ခုတွင် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ထိုနေရာကို မိမိအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း သိရှိထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Hard Drive ၏ Partition ပမာဏ နည်းနေပါက အသုံးမပြုသင့်ဘဲ နေရာလွတ်များနေသော Partition တွင်သာ သတ်မှတ်ထားသင့်ပါသည်။ Virtual Memory ပမာဏ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် မည်မျှသတ်မှတ်သင့်သည် ဆိုသည်မှာ ဝိဝါဒ များစွာကွဲပြားနေသော်လည်း အချို့သော 3D Rendering နယ်ပယ်များအတွက် များစွာ သတ်မှတ်ထားမှသာ Rendering ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ Partition တစ်ခုချင်းစီအတွက် Set ကို နှိပ်ကာ သတ်မှတ်ပြီးပါက OK ကိုနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ စက်မှ ၎င်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် Restart ပြုလုပ်မှသာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Message ပြပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ Restart ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Windows ပြန်တက်လာသောအခါ မိမိသတ်မှတ်လိုက်သော Virtual Memory စတင်သက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပြီး ယခင်ထက်အသုံးပြုမှု မြန်ဆန်လာပါလိမ့်မည်။ Graphic Design သမားများနှင့် 3D Modeling သမားများမဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ထားသင့်ပါသည်။ ယခုလောက်ဆိုလျှင် မိမိစက်အတွက် လိုအပ်မည့် အရံ Virtual Memory သတ်မှတ်ထားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း Administration Tips များကို ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး(PHYO Training Centre)
“နည်းပညာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သိရှိထားသင့်သည်များ (၃)” IT Security
Internet Journal Vol.18 ,No.9 , February 20,2017 Written By Aung Pye Phyo. Personal Security အကြောင်းများနှင့် Malware များအကြောင်းကို ယခင်အပတ်များတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သလို ယခုတစ်ပတ်တွင်တော့ Network Security နှင့် Browsing Security များအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Network Security လူတိုင်းအသုံးပြုနေကြသည့် Online Access များသည် Network များမှသာ အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်သုံးကွန်ပျူတာဖြစ်စေ၊ Mobile Phones များတွင်ဖြစ်စေ Access များအားလုံးသည် ၎င်းစနစ်ကို အသုံးပြုနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့်အတွက် Network နှင့်ပတ်သက်သည့် အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားလေ့လာကြည့်လျှင်- -LAN (Local Area Network) -WAN (Wide Area Network) -WLAN (Wireless Local Area Network) -VPN (Virtual Private Network) အမျိုးအစားများသည် အသုံးများသည့်အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး LAN နှင့် WLAN တို့သည် Computer နှင့် Phone အသုံးပြုသူများအတွက် ရင်းနှီးပြီးသားအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ Firewall မူရင်း ပင်မ Internet Service Provider (ISP) မှလာသော Internet String ကို WAN ဟုခေါ်ဆိုပြီး ၎င်းကိုမှ LAN နှင့် WLAN များအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနေကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ Computer အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Network Security ပိုင်းကို သိရှိမှုအားနည်းသဖြင့် Windows မှလည်း အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပေးသည့်အနေဖြင့် Windows Firewall ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် Malware များ၏ Attack ပြုလုပ်ခြင်းခံရသောအခါ Windows Firewall မှာ အလိုအလျောက် ပိတ်သွားတတ်သည်။ Firewall System သည် Program (သို့) Hardware Device တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပြီး မလိုလားအပ်သည့် တစ်စုံတစ်ခုမှ မိမိ၏ Network အတွင်းသို့ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး အချက်အလက် ခိုးယူခြင်းများကို တားဆီးကာကွယ်ပေးသည်။ အောက်ပါပုံများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ How malware work About Firewall Firewall သည် မိမိအသုံးပြုနေသည့် Internal Network နှင့် External Network တို့အကြား တံတိုင်းအဖြစ် တည်ရှိနေပြီး ကာကွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် မိမိသည် Online စနစ်အသုံးပြုနေရသည့်သူ ဖြစ်ပါက Windows Firewall ကိုအမြဲ ဖွင့်ထားသင့်သည်။ Firewall Setting များကို ပြင်ဆင်လိုပါက (သို့) ပိတ်/ဖွင့် ပြုလုပ်လိုပါက Control Pannel အတွင်းရှိ Windows Firewall ကိုဖွင့်၍ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။အကယ်၍ မိမိစက်အတွင်းရှိ Firewall status သည် Disable/Off ဖြစ်နေပါက Protect မဖြစ်တော့သဖြင့် ၎င်းကို ပြန်လည်၍ ဖွင့်လိုလျှင် Windows ဘယ်ဘက်အခြမ်းရှိ “Turn Windows Firewall on or off” ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ Windows Firewall Wireless Security Phone သုံးသည့်လူတိုင်းနှင့် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သည်။ Computer System တွင်သာမက Phone များတွင်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလေ့ရှိသဖြင့် သိရှိနားလည်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Wireless System Security ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းသည် အချက်အလက်များ အလွယ်တကူ ရယူ ချိုးဖောက်နိုင်ခြေ အများဆုံးဖြစ်နေသည်။ နေရာတိုင်းတွင် WiFi စနစ် ထွန်းကားတွင်ကျယ် လာတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် Data Threat များလည်း များပြားလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ Wireless Security ကိုအသုံးပြုကြရာတွင် အောက်ပါ စနစ်များသည် အသုံးများသည်။ -WEP (Wired Equivalent Privacy) -WPA (Wi-Fi Protected Access) -WPA2-PSK (WPA-Pre Share Key) များဖြစ်ကြပြီး WPA/WPA2 – PSK သည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။၎င်း သည် Wireless Network တစ်ခုကို Access ပြုလုပ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော Password ကိုပေးသွင်းမှသာ Access ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အခြားသော Wireless Security များအဖြစ် -MAC Filtering – (Media Access Control Filtering) -SSID(Hiding) – Service Set Identifier များဖြစ်ကြသည်။ Hardware devices တိုင်း ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် Network ချိတ်ဆက်နိုင်သော Devices တိုင်းတွင် MAC Address ဟုခေါ်ဆိုသော 48bit hardware identifier များပါရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုပြီး Network ချိတ်ဆက်ခြင်းများအတွင်း Filter ပြုလုပ်ကာ Security ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ SSID များသည် မိမိချိတ်ဆက်မည့် Wireless Network တစ်ခု၏ အမည်ဟု အကြမ်းဖျဉ်း မှတ်သား ထားနိုင်ပြီး တွေ့မြင်ရသည့် SSID ရှိသကဲ့သို့ ကွယ်ဝှက်ထားသည့် SSID (Hidden) များလည်း ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့ကို လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ကွယ်ဝှက်ထားလေ့ရှိကာ သိရှိထားသူမှသာလျှင် ဝင်ရောက် Access ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Password Management လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက် အရေးအကြီးဆုံးမှာ Password Management ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Password Security သည် နေရာတိုင်းတွင်အသုံးပြုနေပြီး လူတိုင်းနှင့်လည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် လုံခြုံမှုပေးနိုင်သည့် Password များကို စီမံအသုံးပြုသင့်သည်။ လုံခြုံမှန်ကန်စေသော Password တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်အတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော Policy မှာ- · Password များကို အနည်းဆုံး 8 လုံးမှ 12 လုံးကြားပေးသင့်သည်။ · Password များကို အမြဲတမ်း Complex ဖြစ်အောင်ပေးသင့်ပြီး ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု၊ Capital Letter တစ်ခုနှင့် Special Character (!@#....) တို့ပါသင့်သည်။ · Dictionary တွင် ရှာဖွေခြင်းမပြုနိုင်သည့်စကားစု ဖြစ်သင့်သည်။ · Password များကို တစ်လတစ်ခါဖြစ်စေ၊ ရံဖန်ရံခါဖြစ်စေ Change သင့်သည်။ · Password များတွင် မိမိအမည်၊ နေ့စွဲ၊ အခြားသောသက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များမပါဝင်သင့်ပါ။ ၎င်းအပြင် မိမိကိုယ်တိုင် စဉ်းစား၍မရပါက ကောင်းမွန်လုံခြုံသော Password Management Software ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးများသော Password Management Software များကိုအောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ Dashlane (http://www.dashlane.com ) LastPass (http://www.lastpass.com ) KeePass (
) ယခုလောက်ဆိုလျှင် Network နှင့် Wireless Security ပိုင်းအတွက် သိသင့်သည်များကို သိရှိသွားပြီဟု ယူဆပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း လေ့လာထားကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး (PHYO Training Institute)
နည်းပညာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သိရှိထားသင့်သည်များ (၂) IT Security
Internet Journal Vol.18 ,No.8 , February 13,2017 Written By Aung Pye Phyo. Malware Malware သည် Malicious Software ကို ပေါင်းစပ်ခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ(သို့) Device တစ်ခုအတွင်းသို့ အသုံးပြုသူ ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ဘဲ ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် နှောင့်ယှက် ဖျက်စီးနိုင်ပါသည်။ Malware များကို ခွဲခြားကြည့်လျှင် အောက်ပါအမျိုးအစားများကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ Viruses Malware အမျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသိများသည့်အခေါ်အဝေါ် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကွန်ပျူတာအတွင်း သို့ဝင်ရောက်နေပြီး အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် စက်အတွင်း ပြန့်ပွား သွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုသူ၏စက်အတွင်းရှိ File များနှင့် Folder များကို ဖျောက်ကာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မူရင်း File နှင့် Folder များအဖြစ်ပြောင်းလဲထားပြီး အသုံးပြုသူမှ ၎င်းကို ဖွင့်မိစဉ်တွင် စက်အတွင်းရှိအခြားသော နေရာများသို့ User input ကိုခြေရာခံပြီး အစဉ်အပြတ် ပွားများသွားပြီး ကွန်ပျူတာစနစ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို နှေးကွေးသွားစေရုံသာမက စက်အတွင်းရှိ အရေးကြီး System files များကို ဖျက်စီးကာ အသုံးပြု၍မရတော့သည့်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေနိုင်သည်။ Worms Worms ဟူသော ဝေါဟာရအတိုင်းပင် ကိုယ်တိုင် ပွားများနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူ၏အကူအညီမလိုအပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာ၏ Network များကိုအသုံးချပြီး အခြားချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာများအတွင်းသို့လည်း ၎င်းကိုယ်တိုင် ပွားကာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ Trojan Horses ၎င်းသည် ကိုယ်တိုင်ပွားများခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်နေသောစနစ်၏ နောက်ကွယ်မှနေကာ ဖျက်စီးနိုင်စွမ်းရှိသော Application အမျိုးအစားအဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ Rootkits ၎င်း malware သည်ကွန်ပျူတာ နှင့်အခြားသော Devices များအတွင်းသို့ တိတ်တဆိတ် အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်နေရာယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် Hidden ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ။ Backdoor ၎င်းသည် စကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပင် ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ ပုံမှန်မဟုတ်သော နည်းစနစ်(တစ်နည်းအားဖြင့်) အသုံးပြုသူ၏ User Accounts များကို Bypass လုပ်ခြင်းအားဖြင့် စက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နေနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူမှ မသိရှိနိုင်အောင် ရှောင်ရှားတတ်သည်။ ကွန်ပျူတာများကိုလည်း Remote Access ဖြင့် ဝင်ရောက်ချုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ဆက်လက်၍ Malware များကွန်ပျူတာ(သို့) Device တစ်ခုအတွင်းသို့ မည်သည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဝင်ရောက်လာနိုင်သည်ကို ဆက်လက်လေ့လာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ Malware များသည် အသုံးပြုသူ၏စက်အတွင်းသို့ အောက်ပါနည်းလမ်းများမှ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါသည်။ Adware Advertising Malware များဖြစ်ပြီး Online အသုံးပြုနေစဉ်အချိန်အတွင်း အသုံးပြုနေသူ ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်လောက်သည့် ကြော်ငြာပုံစံများဖြင့် ပြသလေ့ရှိပြီး အသုံးပြုသူမှ စိတ်ဝင်တစား ကလစ်နှိပ်ကာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်း Adware တစ်ခုကို အသုံးပြုသူမှ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုနေစဉ် အတွင်း နောက်ကွယ်မှ စက်အတွင်းသို့ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သည့် Software များကို Download ပြုလုပ်ကာတိတ်တစိတ် ထည့်သွင်းကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင် Download ဆွဲစေခြင်း နှင့် အခြားသော Malicious Sites များသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်စေခြင်းများဖြင့် စွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် Online အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း မလိုလားအပ်သည့် ကြော်ငြာများ ဝင်ရောက်လာပါက ဖွင့်မကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ Spyware ၎င်းတို့သည် Spy ဆိုသည့်အတိုင်း အသုံးပြုသူတို့ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင် ထားပြီးအချက်အလက်များကို ခိုးယူကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုသူ ရိုက်နှိပ်လိုက်သော Keystrokes များကို Capture ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ Screenshots ပြုလုပ်ခြင်း၊ Webcam များကို အလိုအလျောက် ဖွင့်လှစ်ကာ ထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေခြင်း၊ အသုံးပြုသူ သွားလာဝင်ထွက်လေ့ရှိသည့် Sites များကိုမှတ်သားခြင်း၊ Computer အတွင်းရှိ အသုံးပြုနေသာ Application များနှင့် Files များကို ထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ကာ အသုံးပြုသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၊ Account များနှင့် Password များ၊ Bank အချက်အလက်များကို ခိုးယူကြသည်။ ၎င်းတို့သည် Adware များမှတစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ Botnet ၎င်းမှ Bot သည် Robot ၏ အတိုကောက်ကို သုံးနှုံးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာတစ်ခုအတွင်းရှိ Services များနှင့် Tasks များကို အသုံးပြုသူမှ မသိရှိရဘဲနောက်ကွယ်မှ Run နေစေနိုင်သည်။ ထို့အတူ ချိတ်ဆက်ထားသော အလားတူကွန်ပျူတာများအတွင်းသို့လည်း Network များအတွင်းမှ အလိုအလျှောက် ဝင်ရောက်ကာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်သည်။ Keylogger ၎င်းတို့မှာ Hardware သို့ Software ကိုအခြေခံထားကာ တည်ဆောက်ထားသည့် Tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး Keyboard မှရိုက်နှိပ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထောက်လှမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် အသုံးပြုနေသူမှ မသိရှိလိုက်ခင်မှာပင် Accounts Name , Bank information , passwords များကို ရယူသွားနိုင်သည်။ Dialler Dialler များမှာ ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Phone သို့မဟုတ် Modem တစ်ခုခုဖြင့် Network Connection တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ကာ ဖန်တီးထားသူမှ အချက်အလက်များ ရယူနိုင်စေရန် စီမံပေးသည်။ ၎င်းသည် သိသာမြင်သာပြီး စက်မှ အလိုအလျောက် Network Connection တစ်ခုကို Modem ဖြင့်ချိတ်ဆက်နေခြင်းကို ပြသနေမည်ဖြစ်ပြီး မိမိပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါက အချိန်မီပြန်လည် ပိတ်နိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ Malware များသည် ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်း အတွင်းသို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဝင်ရောက်လေ့ရှိပြီး အများဆုံးဝင်ရောက်နိုင်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ အသုံးပြုသည့် User ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို အမြဲမပြတ် သိရှိ သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် Secure connection line (SSL) မဖြစ်သည့် Sites များအတွင်းသို့ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်း၊ Adware များပေါ်သို့ ကလစ်နှိပ်မိခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဂရုတစိုက် အသုံးပြုသင့်သည်။သို့သော်လည်း ထောင်သောင်းများစွာသော Adware များကို ကျွမ်းကျင်သူတို့ပင်လျှင် ရှောင်နိုင်ဖို့ရာ ခက်လှသည်ဖြစ်ရာ မိမိကွန်ပျူတာအတွင်းတွင် စိတ်ချရသော Antivirus Program တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်လည်း ကာကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။ Windows 8 နှင့်အထက်အသုံပြုနေသူများအတွက် Windows Defender မှာ Windows နှင့်အတူ ပါဝင်လာသည်ဖြစ်ရာ အလွန်အဆင်ပြေလှသည်။ သို့သော် Windows7အသုံးပြုနေသူများအတွက်မူ Microsoft Security Essential ကို download ရယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ အခမဲ့ ဖြစ်ပြီး Microsoft ကိုယ်တိုင်မှ ၎င်း Windows အသုံးပြုသူများအတွက်ဖန်တီးပေးထားသည်ဖြစ်ရာ အခြားသော Free Antivirus များထက် စိတ်ချရသည်။MSE ကို Microsoft ၏ Support Website ဖြစ်သော
တွင် ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Language နှင့် Windows Version ကိုရွေးခြယ် Download ပြုလုပ်နိုင်သည်။ထည့်သွင်းပြီးပါက အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူပါသည်။ လိုအပ်သည့် Definition Update ကိုလည်း MSE မှ တိုက်ရိုက် Download ရယူနိုင်သလို Offline အနေဖြင့် ရယူလိုပါကလည်း
တွင် Download ရယူနိုင်ပြီး အခြားသောစက်များရှိ MSE Software များကို Update ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးသည်။MSE နှင့် Windows Defender တို့သည် လုပ်ဆောင်ပုံအတူတူပင်ဖြစ်ပြီး Windows ပေါ်မူတည်၍ အမည်ပြောင်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်ကာ MSE Update ဖြင့်လည်း Defender ကို Update ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Windows Defender Windows Defender နှင့် MSE တွင် Home tab တွင်ရှိသော Scan options ကို အသုံးပြုပြီး စက်အတွင်းရှိ Malware များကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါသည်။ Quick ဖြင့် စစ်ဆေးလျှင် စက်အတွင်းရှိ အရေးကြီးသော System root directory ကိုအဓိက စစ်ဆေးပေးပြီး Full ဖြင့်စစ်ဆေးပါက စက်တစ်ခုလုံးကို စစ်ဆေးပေးသဖြင့် အချိန်များစွာကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် မိမိ သံသယရှိသော အပိုင်းကို သီးသန့် စစ်ဆေးလိုပါက Custom ဖြင့် ရွေးခြယ်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Custom Scan သို့သော် သတိပြုရန်မှာ ပြည်တွင်းတွင်အသုံးပြုနေသော Installation Software များရှိ Crack များနှင့် Keygen များမှာ Virus များအဖြစ်ဖန်တီးထားကြသဖြင့် ၎င်းတို့ကို run မည်ဆိုလျှင် MSE မှ အလိုအလျောက် ပိတ်ပင်တားဆီးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအတွက် History Tab အတွင်းရှိ Quaratined items တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ၎င်းစာရင်းအတွင်းတွင်ရှိသော မိမိ ခွင့်ပြုလိုသည့် အမည်ကို ရွေးကာ Allow ပြုလုပ်ထားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ Quarantine Items Allowed Items ထိုသို့ Allow ပြုလုပ်ပြီးပါက Allowed items တွင် ဝင်ရောက်ကာ မိမိ ပြုလုပ်ထားသော စာရင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ MSE နှင့် Windows Defender တို့သည် ဝင်ရောက်လာသည့် Malware များကို အလိုအလျောက် ကန့်သတ်တားမြစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး User ၏ Permission ရရန်လိုအပ်ပါက အကြောင်းကြား ပေးပြီး မိမိမှ ခွင့်ပြုမည် ၊ ကန့်သတ်မည်၊ ရှင်းလင်းမည်ကို ရွေးခြယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလောက်ဆိုလျှင် Malware များအကြောင်းကို သိရှိနားလည်လောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ Personal Security အတွက် သိရှိနားလည်ထားရမည်ဖြစ်ရာ အလေးထားရမည့် ကဏ္ဍတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ အောင်ပြည့်ဖြိုး (PHYO Training Institute)
နည်းပညာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သိရှိထားသင့်သည်များ (၁) IT Security
Internet Journal Vol.18 ,No.7 , February 6,2017 Written By Aung Pye Phyo. နည်းပညာများ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လူတိုင်းလိုလို နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့် ယဉ်ပါးကာ နေ့တဓူ၀ သုံးစွဲနေလာကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကိုလည်း အလေးထား ဂရုပြုရတော့မည်အချိန်ဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံများကဲ့သို့ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအတွက် မဆိုသာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖို့ အနာဂတ်တွင် ရင်ဆိုင်ရတော့မည့် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံး နည်းပညာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာများကို သိရှိထားမှသာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် IT Security ပိုင်းဆိုင်ရာကို လေ့လာလိုသူများနှင့် IT Security Exam များကို ဝင်ရောက် ဖြေဆိုလိုသူများအတွက် သိသင့် လေ့လာထားသင့်သည်များကို ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Personal Information များကို လုံခြုံစိတ်ချစေခြင်း Personal Information များသည် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အလွန်အရေးပါသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Bank account number , credit card number , personal email များ online shopping လုပ်ဆောင်နေသူများအတွက် လိုအပ်သော user name များ နှင့် password များ အစရှိသည့် အချက်အလက်များသည် အရေးကြီးလှပါသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပေါက်ကကြား သွားပါက ရရှိထားသော တစ်ဘက်လူမှ မိမိအမည်ကိုသုံးစွဲပြီး ၎င်းအလိုရှိရာ ငွေပေးချေခြင်းများ၊ ဝယ်ယူခြင်းများ စသဖြင့် မမျှော်မှန်းထားနိုင်သော အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သွားစေနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ငွေပေးချေသော Websites များနှင့် Web-based technology အသုံးပြုနေရသည့် သူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကုပ္မဏီများမှ personal information များကိုလုံခြုံစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရ ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Online ငွေပေးချေမှုများနှင့် အခြားသော Transactions များလုံခြုံစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များမှ OTP Devices များဖြင့် ထိန်းချုပ်ပေးထားခြင်း၊ 3D Secure digital security များကို အသုံးပြု၍ လုံခြုံစိတ်ချရအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများဖြင့် personal information များကို ထိန်းသိမ်းပေးထားကြပါ သည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိ၏ Account user name များနှင့် Password များကို public area များအတွင်းရှိ Computer များတွင်အသုံးပြုခြင်း၊ Login approval များကို အသုံးမပြုဘဲ လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက် နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းများကို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ မရှောင်ရှားနိုင်၍ အသုံးပြုမည် ဆိုပါကလည်း မိမိအသုံးပြုပြီးသည်နှင့် Recent data များကို ဖျက်ခဲ့ခြင်း၊ အသုံးပြုခဲ့သည့် History များကို ရှင်းလင်း ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ personal အသုံးပြုခဲ့သည့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Mozilla firefox ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Ctrl+Shift+Delete (Clear recent history) ကို နှိပ်ပြီး ပေါ်လာသော box မှ မိမိဖျက်လိုသည့် အချိန်အတိုင်းအတာကိုရွေးခြယ်ပြီး Clear လုပ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ Firefox clear recent history အကယ်၍ Internet Explorer နှင့် Microsoft Edge ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လည်း Ctrl+Shift+Delete ကိုတွဲနှိပ်ပြီး Clear browsing data ကိုအသုံးပြုကာ ဖျက်နိုင်ပါသည်။ Edge တွင်ပါရှိသော Always clear this when I close the browser ကို On ထားပေးခြင်းဖြင့်လည်း windows မှ အလိုအလျောက် ဖျက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ Data Security (Encryption) မိမိ၏အရေးကြီးသော data များကိုအစဉ်အမြဲလုံခြုံမှုရှိနေစေရန် အလေးထားသင့်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Data များလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းများအတွက် Online စနစ်ကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ရာ မိမိပေးပို့ လိုက်သော အချက်အလက် files များကို လုံခြုံစေရန်အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွင် အများဆုံးအသုံပြုကြသည့် Microsoft Office Application များအားလုံးတွင် file security များသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် အခြားသော အသုံးများသည့် Application များတွင်လည်း file security system များပါရှိကြစမြဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် မိမိ၏ Microsoft Office Application files များကို လုံခြုံအောင် ဖန်တီးထားနိုင်ပါသည်။ Microsoft Office Word document ဖြင့် ဥပမာပြလိုပါသည်။ မိမိဖန်တီးပြီးသား Word file တစ်ခုကို protect ပြုလုပ်ရန်အတွက် file menu အတွင်းရှိ Protect document ကိုရွေးခြယ်လိုက်ပါ။ Protect Document ၎င်းနောက် ပေါ်လာသော drop-down list မှ မိမိရွေးခြယ် သတ်မှတ်လိုသည့် security အမျိုးအစားကိုရွေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့် Encrypt with password ကို ရွေးခြယ်လိုက်ပါ။ထိုအခါ Encrypt ပြုလုပ်ထားလိုသည့် password ရိုက်ထည့်ရန် တောင်းပါလိမ့်မည်။ Password Encryption ၎င်းနောက်ထပ်မံ၍ Confirm password တောင်းမည်ဖြစ်ပြီး မူလ password အတိုင်းရိုက်ထည့်ပြီး အသုံပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်း file ကို မိမိပေးထားသော password ဖြင့်သာဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသော Microsoft Office Application များတွင်လည်း ထိုနည်းတူ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Disabling Macros Macros များသည် အလိုအလျောက် repetitive လုပ်ဆောင်ခြင်း (သို့) မကြာခဏ tasks များကို လုပ်ဆောင်စေခြင်းများဖြင့် Microsoft Office ကို စေခိုင်းနိုင်သည်။ ၎င်း micros များကို Software developer များမှ VBA(Visual Basic Applications) ကိုအသုံးပြု၍ လည်းကောင်း Macro recorder feature ကိုအသုံးပြု၍လည်းကောင်း အဖျက်အမှောက် များကိုဖန်တီးနိုင်သဖြင့် Virus များပြန့်ပွားစေခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် Virus များကပ်ပါလာပြီး အသုံးပြုသူ user များ၏ စက်အတွင်းရှိ အရေးကြီးအချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် အသုံးများသည့် site address၊ user name များနှင့် password များအစရှိသည်တို့ကို ခိုးယူနိုင်ပြီး ပြုလုပ်ထားသော Virus ၏ လုပ်ဆောင်မှုပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်၍ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သဖြင့် ၎င်း Macro များကို မိမိစက်အတွင်း Run နိုင်ခြင်းမရှိအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတွက် Office user များအနေဖြင့် Macros များကို အလိုအလျောက် Disable ပြုလုပ်ထားခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ထားနိုင်ပြီး အလိုရှိသည့်အခါမှ ပြန်လည် Enable လုပ်ဆောင်ခြင်း များကို ပြုလုပ်တတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။၎င်း Macro security setting များသည် Office Application များ၏ Files menu မှတစ်ဆင့် Options၊ ၎င်းမှ Trust Centre ၊ ၎င်းမှ Trust Centre Setting အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Microsoft Application များသည် ၎င်း Macro များကို အလိုအလျောက် Disable ပြုလုပ်ထားပေးပြီး ၊ အခါအားလျော်စွာ မိမိစက်အတွင်းမှ Malware များ၊ Virus များမှ ၎င်းတို့ကို အလိုအလျောက် Enable ပြုလုပ်ထားတတ်သဖြင့် User များအနေဖြင့် စစ်ဆေးပြီး Disable ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Disable ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း Disable all macros with notification ကိုရွေးခြယ်ထားခြင်းအားဖြင့် လိုအပ်သည့်အခါများတွင် Office Application မှ Notification ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ပါဦးမည်။ Aung Pye Phyo (PHYO Training Institute)